သံသရာ တပတ်ပြန်လည်လာသော ဖြတ်လေးဖြတ် စီမံကိန်း ~ Nge Naing
သံသရာ တပတ်ပြန်လည်လာသော ဖြတ်လေးဖြတ် စီမံကိန်း
Sunday, May 29, 2011 Nge Naing 60 comments
မကြားရတာ ကြာပြီဖြစ်တဲ့ ဖြတ်လေးဖြတ်အကြောင်းကို ပြန်ကြားရတဲ့အချိန်မှာ ကျွန်မတို့ ငယ်ငယ်က ကျွန်မတို့ရွာရဲ့ တဘက်ကမ်းမှာ ရှိတဲ့ ကရင်ရွာတွေအားလုံး ဗမာရွာတွေအနီး တန်းလျားထိုးပြီး လာနေကြတဲ့အချိန်ကို မနေ့တနေ့ကလို ပြန်သတိရလာတယ်။ ဖြတ်လေးဖြတ်ဆိုတာက အာဏာရှင် အဆက်ဆက်က တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေရဲ့ အသက်သွေးကြောကို ဖြတ်တောက်ရန် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် လူထုဆီက ဆေးဝါး၊ ရိက္ခာ၊ ဘဏ္ဍာ၊ သတင်းနှင့် အဆက်အသွယ်တို့ကို မရအောင် လက်နက်ကိုင် အင်အားစုတွေ ၀င်ထွက်သွားလာနေတဲ့ ရွာတွေကို အတင်းအဓမ္မ ရွှေ့ပြောင်းစေပြီး တော်လှန်ရေး အင်အားစုတွေကို လူထုနဲ့ ဖြတ်တောက်ပစ်တဲ့ စီမံကိန်းဖြစ်တယ်။ တော်လှန်ရေး အင်အားစုတွေ ပျက်စီးသွားမယ် ထင်ပြီး ဒီလိုလုပ်တာဖြစ်ပေမဲ့ တကယ်တော့ တော်လှန်ရေး အင်အားစုတွေ ဘာမှဖြစ်မသွားဘဲ ပြည်သူလူထုမှာသာ ပျက်စီးဆုံးရှုံးပြီး ဒုက္ခမျိုးစုံနဲ့ ရင်ဆိုင်ရပါတယ်။ အဲဒီတုန်းကတော့ ငယ်သေးတော့ ဒါကို ဖြတ်လေးဖြတ် စီမံကိန်းလို့ ခေါ်မှန်းလည်း မသိခဲ့ဘူး။ ကျွန်မတို့နယ်မှာ KNU တပ်တွေကို ကရင်တပ်လို့ မခေါ်ဘဲ ကော်သူးလေတပ်တွေလို့ ခေါ်လေ့ရှိပြီး ကရင်လို့ ပြောလိုက်ရင် ရိုးရိုးအရပ်သားတွေကိုသာ ရည်ညွန်းပြီး ကော်သူးလေဆိုရင်တော့ KNU တပ်က စစ်သားတွေကို ရည်ညွန်းပါတယ်။ အဲဒီတုန်းက ကျွန်မတို့ ရွာနားမှာ ကရင်တွေလာနေကြတာကို ကော်သူးလေတွေ ဆက်ကြေးကောက်ပြီး ရွာသားတွေကို ညှင်းဆဲမှာစိုးလို့ ကရင်ရွာတွေကို ဗမာရွာနား ရွှေ့ထားတယ်ဆိုတာပဲ ကျွန်မတို့ နားလည်ခဲ့ပါတယ်။
မြန်မာပြည်က ကျွန်မတို့နယ်ဘက်မှာ သဘာဝတောတောင်တွေ အင်မတန်များပြီး ဗမာတွေအခေါ် ချောင်းဖျားလို့ ခေါ်တဲ့ ကရင်ရွာတွေအလွန် တောတောင်တွေထဲမှာ သဘာဝအလျောက် ပေါက်နေတဲ့ ဟင်းသီးဟင်းရွက်နှင့် လယ်ယာခြံမြေသုံး ပစ္စည်းတွေကို ချောင်းရင်းမှာ နေတဲ့ ဗမာတွေက သွားရှာလို့ ရသလို ချောင်းဖျားရှိ ကရင်တွေကလည်း ဗမာရွာတွေကို ဖြတ်ပြီး ငါး၊ ရှပ်ခေါ် ဂုံးကောင်တွေနဲ့ ပင်လယ်ပြင်မှ ထွက်တဲ့ တခြားအသားငါး အသုံးအဆောင်တွေကို သွားရောက် ရှာဖွေစားသောက်လို့ ရပါတယ်။ ကျွန်မတုိ့ ရွာတွေက ရေချိုရေငန်စပ်မှာ ရှိပြီး ကျွန်မတို့ခြံက ဒီရေထတဲ့အပတ်(လပြည့်နဲ့ လပြည့်ခါနီးကာလ) မှာ ဒီရေတက်ရင် ရေငန်ရောက်ပြီး ဒီရေပြန်ကျသွားတဲ့အချိန်နဲ့ ရေသေတဲ့ပတ်တွေ (လကွယ်နဲ့ လကွယ်ရက်အနီးကာလ) မှာတော့ ချောင်းထဲမှာ ရေချိုပဲရှိတဲ့ ချောင်းရင်းနဲ့ ချောင်းဖျား ကြားမှာ ရှိပါတယ်။
ပင်လယ်ပြင်က ထွက်တဲ့အစားအစာကို ဗမာတွေက ရှာပြီး ချောင်းဖျားမှာ သွားရောင်းတာကို ကရင်တွေက ပြန်ဝယ်စားတာ များပြီး ချောင်းဖျားက သဘာဝဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေကို ကရင်တွေက ရှာဖွေပြီး ဗမာရွာတွေမှာ ပြန်လာရောင်းတာကို ဗမာတွေက ပြန်ဝယ်စားတာ များပါတယ်။ အစားအသောက်တွေကိုသာ ၀ယ်စားတာ များပေမဲ့ လယ်သမာား အတော်များများက သစ်၊ ၀ါး၊ ကြိမ် စတဲ့ အိမ်နဲ့ လယ်ယာ ခြံမြေသုံး ပစ္စည်းတွေနဲ့ မိုးဦးကျကာလ မိုးစာထင်း စသည်တို့ကိုတော့ မ၀ယ်ဘဲ ရိက္ခာအလုံအလောက် ယူသွားပြီး တောတောင်တွေအထဲမှာ ညအိပ်ညနေ ကိုယ်တိုင် သွားခုတ်ကာ ဖေါင်နဲ့ မျောချလာတာ များပါတယ်။ ချောင်းရင်းက လူတွေက အသီးနှံတွေကို များများ လိုအပ်လို့ဖြစ်စေ၊ အပျော်သဘောနဲ့ တောထဲကိုယ်တိုင် သွားရှာချင်လို့ ဖြစ်စေ တောထဲမှာ ညအိပ်ညနေ သွားခူးပြီး သစ်ဖေါင်ဝါးဖေါင်ဖွဲ့ကာ မျောချလာတာမျိုး ရှိသလို ချောင်းဖျားက လူတွေကလည်း လက်လှော်လှေ ငှားပြီး ပင်လယ်ကမ်းခြေက သဲသောင်မှာ ကိုယ်တိုင် ရှပ်(ဂုံးကောင်တမျိုး) သွားကောက် ငါးသွားဖမ်းကြတာ တခါတလေ ရှိပါတယ်။ ဒညှင်းသီးက ကျွန်မတို့ နယ်မှာ ကိုယ်ပိုင်ခြံထဲမှာ စိုက်ထားစရာ မလိုဘဲ ပေါ်ချိန်မှာ ဘယ်သူမဆို သွားခူးလို့ရတဲ့ တောထဲမှာ သဘာဝအတိုင်း ပေါက်နေတဲ့ အသီးနှံတခု ဖြစ်တယ်။ ကျွန်မဆယ်နှစ်ခန့်က ကျွန်မအဖေနဲ့ အိမ်နားခြံက မိတ်ဆွေတဦး ဒညှင်းသီးပေါ်တဲ့ မိုးရာသီမှာ တောထဲက ဒညှင်းသီး သွားခူးပြီး ဂုံနီအိတ်ကြီးတွေနဲ့ ထည့်ပြီး ၀ါးဖေါင်နဲ့ မျှောချလာလို့ မိသားစုဝင်တွေက ကမ်းနားမှာ ဆင်းသယ်ရတာကို ကောင်းကောင်း မှတ်မိနေသလို လက်လှော်လှေတစီး ငှားပြီး ပင်လယ်ကမ်းနားက သဲသောင်မှာ ရှပ်သွားကောက်လာလို့ သွားသယ်ရတာကိုလည်း သတိရနေတယ်။
ကျွန်မတို့ ရွာကနေပြီး ရော်ဘာခြံတို့ လယ်ကွက်တို့ကို ဖြတ်ပြီး ချောင်းကို ကူးပြီးတာနဲ့ ဟိုဘက်ရောက်ရင် တောက်လျှောက် ကရင်ရွာတွေကိုပဲ တွေ့ရတော့တယ်။ ကျွန်မတို့က ရွာစွန် ခြံထဲမှာနေတော့ ကရင်ရွာနဲ့ ပိုနီးပြီး သမ၀ယမမှာ ပစ္စည်းထုတ်ရင် ကရင်တွေထုတ်တဲ့ နေရာမှာပဲ ထုတ်ရပါတယ်။ ကရင်ရွာတွေနဲ့ ဗမာရွာတွေအကြား စက်လှေတွေ၊ လှည်းတွေနဲ့ ဖြစ်စေ၊ ခြေကျင်ဖြစ်စေ နေ့စဉ် အသွားအပြန်ရှိကြပါတယ်။ ဗမာရွာမှာ ဘုရားပွဲလုပ်ရင် ကရင်ရွာသားတွေလည်း ရွာလုံးကျွတ်လာပြီး ကရင်ရွာတွေမှာ ကရင်နှစ်သစ်ကူးနေ့တို့ ခရစ်စမတ်နေ့တို့ လုပ်ရင်လည်း ဗမာတွေ ရွာလုံးကျွတ်နီးပါး သွားကြပါတယ်။ ဒီလို ကူးသန်း ရောင်းဝယ်ကာ ကူးလူးဆက်ဆံရင်းနဲ့ ကရင်နဲ့ ဗမာ လူငယ်ချင်း ရင်းနှီးကာ ချစ်ခင်စုံမက်ကြပြီး တအိုးတအိမ် ထူထောင်ကြတဲ့ စုံတွဲတွေလည်း များစွာ ရှိပါတယ်။ ဆိုလိုတာက ရွာသားတွေအချင်းချင်း ကြားမှာ ကရင်ရွာတွေနဲ့ ဗမာရွာတွေ အပြန်အလှန် ကူးလူးဆက်ဆံမှုက ဘာပြဿနာမှကို မရှိခဲ့တာ အမှန်ပါ။
ချောင်းဖျားက ကရင်ရွာတွေကို မ၀င်ခင် ပထမဦးဆုံး တွေ့ရတာက ကျွန်မတို့ရွာက မစိန်နဲ့ အဲဒီရွာက ကရင်အမျိုးသား စောဘမောင် အိမ်ထောင်ကျပြီး ဈေးဆိုင်လေး တဆိုင်တည်ထားတဲ့ ဈေးဆိုင်လေးကို တွေ့ရပါတယ်။ ချောင်းဖျားနဲ့ ချောင်းရင်း ခရီးသွား အတော်များများ သူတို့ဆိုင်မှာ တထောက်နားပြီးမှ ခရီးဆက်လေ့ရှိတော့ ချောင်းဖျားကလာတဲ့ပစ္စည်းနဲ့ ချောင်းရင်းကလာတဲ့ ပစ္စည်းတွေကို သူတို့ဆိုင်လေးမှာ ရနိုင်ပါတယ်။ တချို့ကရင်တွေက သူတို့သားသမီးတွေကို သူတို့ရွာက စာသင်ကျောင်းမှာ မအပ်ဘဲ ကျွန်မတို့ ရွာက ကျောင်းမှာ လာအပ်တာလည်း ရှိပါတယ်။ ကျွန်မ မှတ်မိသလောက် ကျွန်မ သုံးတန်းနဲ့ လေးတန်းနှစ်မှာ စောဝင်းမြင့်တို့ မောင်နှမ သုံးယောက်အပါအ၀င် ကရင်ကျောင်းသားတချို့ ကျွန်မတို့ ရွာက ကျောင်းကို ပြောင်းလာခဲ့ပါတယ်။ သူတို့အားလုံးက စာတော်ကြပြီး အတန်းထဲမှာ အတော်ဆုံးကျောင်းသားတွေ စာရင်းထဲ ပါဝင်ပါတယ်။
ဒီလိုနဲ့ နွေရာသီကျောင်းပိတ်ရက်ရောက်လာတဲ့ အခါမှာတော့ ကျွန်မတို့ ရွာက စစ်တပ်မှာ စစ်သားဦးရေ တိုးလာတာ တွေ့ပြီး အနီးနား ပတ်ဝန်းကျင်က ကရင်ရွာတွေ အားလုံးကို ကျွန်မတို့ ရွာနဲ့ အနီးတ၀ိုက်မှာ တန်းလျားထိုးပြီး လာနေရမယ်လို့ စစ်တပ်က အမိန့်ချကြောင်း ကြားရတယ်။ အကြောင်းပြချက်ကတော့ အပေါ်မှာ ပြောတဲ့အတိုင်း ကော်သူးလေတပ်တွေ အနှောင့်အယှက်မှ ကင်းအောင်လို့ ပြောပါတယ်။ ကျွန်မက ဒါဆိုရင်တော့ စောဝင်းမြင့်တို့လည်း ကျောင်းနဲ့ နီးသွားလို့ အဝေးကနေ လာစရာမလိုတော့ဘူးလို့ တွေးနေတယ်။ ရွာသားတွေကလည်း မစိန်တို့မိသားစုတော့ တခြားသူတွေလို တန်းလျားထိုး နေစရာမလိုဘဲ သူ့မိဘတွေအိမ်မှာ နေလို့ရတာပေါ့လို့ ပြောနကြတယ်။
အဲဒီအမိန့်ချပြီးနောက်ပိုင်း ပြောင်းရွှေ့ဖို့ သတ်မှတ်ထားတဲ့ ကာလမှာတော့ မကြာခဏ ဆိုသလို စစ်တပ်နဲ့ ကော်သူးလေ တပ်တွေတိုက်ပွဲ ဖြစ်ပြီး စစ်တပ်က ဘယ်သူ့ကို ကော်သူးလေ သတင်းပေးဆိုပြီး ဖမ်းသွားပြန်ပြီ၊ ကော်သူးလေတပ်ကလည်း ဘယ်သူ့ကို စစ်တပ်သတင်းပေးလို့ ဆိုပြီး ဖမ်းသွားပြန်ပြီနဲ့ အရပ်သားတွေဟာ အရင်လို အေးအေးအေးဆေးဆေး နေခွင့်လုံးဝ မရတော့ဘဲ ဗမာရွာသားတွေရော ကရင်ရွာသားတွေပါ ကျီးလန့်စာစား ဘ၀ကို ရောက်သွားပါတော့တယ်။ ဒီအချိန်မှာပဲ ကျွန်မတို့ရွာက မစိန်နဲ့ ယူထားတဲ့ စောဘမောင်ကိုလည်း စစ်တပ်က ကော်သူးလေ သတင်းပေးဆိုပြီး စွပ်စွဲကာ လိုက်ဖမ်းလို့ တောခိုသွားတယ် ဆိုတဲ့သတင်းက တရွာလုံးကို ပြန့်နှံ့သွားတယ်။ ဗမာမနဲ့ ယူထားတဲ့ စောဘမောင်တယောက် အဲလိုမျိုး လုပ်လိမ့်မယ်လို့ ဘယ်သူမှ မထင်ထားလို့ အားလုံးက အံ့သြလို့ မဆုံး ဖြစ်ခဲ့ကြတယ်။ မစိန်နဲ့ ကလေးနှစ်ယောက်ကတော့ အများ အကြံပြုတဲ့အတိုင်းပဲ ဗမာရွာက သူ့မိဘအိမ်မှာ ပြန်လာနေဖို့ကို မျှော်လင့်နေကြတယ်။
အတော်ကြာတော့ ကရင်ရွာက တချို့က ကော်သူးလေတပ်တွေကို ကြောက်လို့ မြို့ကိုအပြီး ပြောင်းသွားကြပြီဆိုတာ ကြားရသလို တချို့ကလည်း စစ်တပ်ကို ကြောက်လို့ ကော်သူးလေထဲ ၀င်သွားပြန်ပြီ၊ ဘယ်သူ့ကို စစ်တပ်က သတ်လိုက်ပြန်ပြီ စသည်ဖြင့် အဖမ်းခံရသူ အသတ်ခံရသူတွေရဲ့ အနိဋ္ဌာရုံ သတင်းတွေက တနေ့တခြား နားနဲ့ မဆံ့အောင် ကြားလာရပါတယ်။ ညဘက်ရောက်ရင်လည်း အေးအေးဆေးဆေး အိပ်လို့မရ ဘယ်တော့ အနားကပ်ပြီး သေနတ်သံ ကြားရမလဲဆိုတာ အမြဲတွေးပူနေရတယ်။ စစ်တပ်အမိန့်ကို စသိရတဲ့နေ့က စပြီး စစ်တပ်နဲ့ ကော်သူးလေတပ်တွေ တိုက်ပွဲဖြစ်ရင် အချိန်မရွေး အထုပ်ဆွဲပြေးပြီး ၀ပ်လို့ရအောင် အမြဲတမ်း အဆင်သင့် ပြင်ထားရတယ်။ ကရင်ပဲဖြစ်ဖြစ် ဗမာပဲဖြစ်ဖြစ် ရွာသားတွေကတော့ ဘယ်သူမှ မလုံခြုံဘူးလို့ ခံစားရပါတယ်။ ဒီဒုက္ခတွေကို မြို့ပေါ်ကလူတွေ မခံစားဖူးလို့ သိမယ်မထင်ဘူး။ ကျွန်မတို့ခြံက နည်းနည်းချောင်ကျတော့ စစ်တပ်နဲ့ ကော်သူးလေတပ် တိုက်ပွဲဖြစ်ရင် ကျည်ဆံမရောက်နိုင်တဲ့ နေရာဖြစ်လို့ ညဘက်ဆို ကရင်ဘက်ကမ်းမှာ နေတဲ့ ဗမာအတော်များများ ကျွန်မတို့ အိမ်မှာ လာအိပ်ကြပါတယ်။
ရွာတွေ ပြောင်းရွှေ့ဖို့ သတ်မှတ်ထားတဲ့နေ့ နီးကပ်လာလေ အဖမ်းအဆီးကလည်း များလာလေနဲ့ တချို့က သတင်းပေးလည်း မဟုတ် ဘာမှလည်း မဟုတ်ဘဲ အထင်မှားခံရကာ အဖမ်းခံရ ညှင်းဆဲခံရတာလည်း ရှိတော့ ဘယ်သူနဲ့မှ မပတ်သက် ဘာမှအပြစ်မလုပ်ထားတဲ့ ရွာသားတွေကလည်း အမြဲတမ်း ကျီးလန့်စာ စားသလိုပဲကြောက် နေရပါတယ်။ ကရင်ရွာတွေကို ပြောင်းရွှေ့ဖို့ သတ်မှတ်ထားတဲ့ နောက်ဆုံးနေ့ နီးကပ်လာတဲ့အချိန်မှာတော့ မမျှော်လင့်ဘဲ မစိန်တို့ သားအမိက သူ့မိဘအိမ်ကို ရောက်မလာဘဲ စောဘမောင်နောက်ကို လိုက်ပြီး တောခိုသွားတယ် ဆိုတာနဲ့ စောဝင်းမြင့်တို့ မိသားစု တစုလုံးလည်း တောခိုသွားပြီ ဆိုတဲ့သတင်းက တရွာလုံးကို ပြန့်နှံ့သွားတော့ ဘယ်သူမှ မထင်ထားတဲ့သူတွေ ဖြစ်တော့ တရွာလုံးက အံ့သြရပြန်တယ်။ ဗမာဖြစ်ပြီး ကရင်နဲ့ယူတာကို နဂိုကတည်းက သိပ်သဘောမတူတဲ့ မစိန်မိဘတွေလည်း ဒီလောက်ပဲ မိုက်ရတဲ့သမီးဆိုပြီး ယူကျုံးမရ ဖြစ်ပြီး ကျန်ခဲ့ပါတယ်။ ကျောင်းပြန်ဖွင့်တဲ့ အချိန်မှာတော့ ကျောင်းကို ပြန်မရောက်လာတော့တဲ့ အတန်းထဲမှာ ပညာတော်ကြတဲ့ စောဝင်းမြင့်တို့ မောင်နှမတွေကိုလည်း ကျောင်းသားတွေရော ဆရာတွေပါ လွမ်းပြီးကျန်ခဲ့ပါတယ်။
ဒီလိုနဲ့ ကရင်ရွာတွေက ဗမာရွာနားနီးတဲ့ နေရာတွေကို ရွှေ့ပြီး နေလာရတာ မိမိဥယာဉ်ခြံထဲမှာ အသီးအရွက် သွားခူးတာတို့ ထင်းသွားခွေတာတို့လည်း လုပ်လို့မရ တခါတလေ ကိုယ့်ဥယာဉ်မှာကိုယ် အသီးအနှံသွားခိုးခူးမိလို့ စစ်တပ်နဲ့ တွေ့ရင်တော့ မထင်ရင် မထင်သလို ရန်သူသတင်းပေးလို့ စွတ်စွဲပြီး ပြဿနာအရှာခံရ အသတ်ခံရတဲ့အဆင့်ထိ ရှိပါတယ်။ အရင်က သစ်ခုတ်၊ ၀ါးခုတ်၊ ထင်းခုတ်၊ ကြိမ်ခုတ်နဲ့ သဘာဝဟင်းသီးဟင်းရွက်ကို ကရင်ရွာတွေကို ကျော်ပြီး တောထဲတောင်ထဲမှာ ကရင်ဗမာ ဘယ်သူမဆို အချိန်မရွေး သွားရှာလို့ရနေတဲ့ အခြေအနေကနေ ကရင်တွေက မိမိတို့ ကိုယ်ပိုင် လယ်ယာခြံမြေမှာတောင် သွားခူးစားလို့မရတော့တဲ့ အခြေအနေကို ရောက်သွားပါတယ်။ ကရင်တွေအတွက် ဒီလို အိုးပစ်အိမ်ပစ်ပြီး ဘာမှလုပ်ကိုင်စားသောက်စရာ မရှိဘဲ ဗမာရွာနားမှာ လာနေရတာ တော်တော်လေးကို အနေအစား ကြပ်တည်းစေပါတယ်။ တချို့ကိုကျတော့ ကော်သူးလေတပ်တွေက မဆလ လက်ပါးစေတွေဆိုပြီးတော့ စွတ်စွဲခံရတာလည်း ရှိတော့ တပ်နှစ်တပ်ကြားမှာ ပြည်သူလူထုဟာ တကယ်ကို ဘေးကြပ်နံကြပ်နဲ့ ဒုက္ခ ရောက်ခဲ့ပါတယ်။
အဲဒီတုန်းက ကျွန်မတို့ရွာက ပြည်သူ့ကောင်စီအတွင်းရေးမှူးကို ကရင်တပ်စိတ်တစိတ်က စစ်တပ်ယူနီဖေါင်းတွေဝတ်ကာ စစ်တပ်ဟန်ဆောင်ပြီး ကျွန်မတို့ ရွာထဲက လက်ဘက်ရည်ဆိုင်မှာ ညဘက် ရှောင်တခင်ဝင်ရောက် လာလုပ်ကြံခဲ့ရာမှာ လူမှားပြီး ပစ်မိလို့ ကျွန်မနဲ့ ဆွေမျိုးမကင်းသူ အစ်ကိုတယောက် သေဆုံးခဲ့ရဖူးပါတယ်။ ဖြစ်ပုံက အဲဒီအချိန်က ကျွန်မတို့နယ်မှာ အမျိုးသားအတော်များများက ခေတ်မီသူတိုင်း ဗီယက်နာမ်ဂျာကင် ၀တ်တယ်ဆိုပြီး တပ်မတော်အရောင် ဗီယက်နာမ်လုပ် အနွေးထည်ကို လူငယ်နဲ့ လူလတ်ပိုင်း အမျိုးသား အတော်များများ ၀ယ်ဝတ်ကြတဲ့အချိန်ဖြစ်နေတယ်။ လာလုပ်ကြံတဲ့ သူတွေက အတွင်းရေးမှူးကို တခါမှမမြင်ဖူးဘဲ အသက်အရွယ်၊ လူပုံပန်းသဏ္ဍန်နဲ့ ဗီယက်နာမ်ဂျာကင်ဝတ်ပြီး ဒီအချိန် ဒီလက်ဘက်ရည်ဆိုင်ထဲမှာ ညတိုင်း ထိုင်တတ်တယ်ဆိုတာပဲ သိထားတော့ ဗီယက်နာမ် ဂျာကင်ဝတ်ထားတဲ့ သူနဲ့ ခပ်ဆင်ဆင် ကျွန်မ အစ်ကိုတော်သူကို ညဘက်မီးအိမ် မှိန်မှိန်အောက်မှာ မှားပြီး ပစ်သတ်သွားတာ ဖြစ်တယ်။ အမှန်က အဲဒီလက်ဘက်ရည်ဆိုင်က စစ်တပ်အောက်တည့်တည့်မှာ ရှိပြီး ဒီလက်ဘက်ရည်ဆိုင်ကို ရောက်ဖို့အတွက် စစ်တပ်ရှိရာ ဘုန်းကြီးကျောင်းကုန်း အရှေ့မျက်နှာစာဘက် လမ်းကိုဖြတ်ပြီး အနောက်တည့်တည့်ကို လျှောက်လာပြီး ဘယ်ဘက်ကို အကွေ့ ဘုန်းကြီးကျောင်းကုန်းရဲ့ အောက်အနောက်တည့်တည့်မှာ ရှိပါတယ်။ ကော်သူးလေတွေက ပစ်သတ်ပြီးတာနဲ့ ချက်ချင်း တခြားလုပ်စရာ ရှိသေးလို့ သွားဦးမယ်ဆိုပြီး ဟန်မပျက်ဘဲ ထသွားတဲ့အထိ ရွာသားတွေက သူတို့ကို ကော်သူးလေတွေဆိုတာ အတိအကျ မသိသေးဘဲ စစ်တပ်ပဲ ထင်ပြီး ဘာပြောလို့ပြောရမှန်းမသိ အံ့သြပြီးကျန်ခဲ့နေရာကနေ အတော်ကြာမှ ကုန်းပေါ်က စစ်တပ်ကလည်း ဆင်းလာ လူတွေကလည်း စုလာမှ ကော်သူးလေတပ်က ဟန်ဆောင်ပြီး လာပစ်ခဲ့တယ်ဆိုတာ သဘောပေါက်သွားတယ်။ စစ်တပ်က ဘယ်လိုပဲ အကာအကွယ် ပေးထားတယ်ပြောပြော ဘယ်လိုပဲ ဖြစ်လေးဖြတ် လုပ်ထားတယ် ပြောပြော စစ်တပ်နားမှာ ကပ်ပြီးနေတဲ့ လူတယောက်ကိုတာင် ကော်သူးလေတပ်က သူတို့ သတ်ချင်ရင် ဒီလောက်အထိ လွယ်လွယ်ကူကူ ၀င်သတ်လို့ ရနိုင်တဲ့အခြေအနေ ရှိတယ်ဆိုတဲ့ သင်ခန်းစာ ရသွားပါတယ်။
၈၈ နောက်ပိုင်းမှာ ကျွန်မတို့ ABSDF တပ်တွေနဲ့ KNU တပ်တွေ ပူးပေါင်းထားတဲ့ DAB စစ်ကြောင်း (၃) က အဲဒီဒေသက ရှေ့တန်းနယ်မြေဒေသတေချို့ကို သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပြီး လှုပ်ရှားနယ်မြေတွေကို တိုးချဲ့နိုင်ခဲ့ပေမဲ့ ၉၃ နောက်ပိုင်းမှာတော့ နယ်မြေအတော်များများကို ပြန်လက်လွှတ်လိုက်ရပြီး ၉၅ နောက်ပိုင်းမှာ အဲဒီလိုပဲ ဖြတ်လေးဖြတ် စီမံကိန်းကို ကျွန်မတို့နယ်မှာ ပြန်လုပ်ခဲ့တယ်လို့ ကျွန်မ ကရင်နီဘက် ဗဟိုရောက်ပြီး နောက်ပိုင်း ကြားသိရပါတယ်။ ရွာသားတွေကို ပြည်သူ့စစ်မလုပ်မနေရ စနစ်နဲ့ လုပ်ခဲ့လို့ အဲဒီတုန်းကလည်း ကျွန်မအမေရဲ့ မောင်အရင်း ကျွန်မဦးလေးက ပြည်သူ့စစ်ခေါင်းဆောင် လုပ်ရပြီး ကရင်တပ်တွေ ညဘက်ဝင်ပစ်သတ်လို့ သေဆုံးခဲ့ရပါတယ်။ ကျွန်မ ဦးလေးက ကျွန်မတို့ ရှေ့တန်းဒေသမှာ ရှိနေစဉ် ၉၂ ခုနှစ်တုန်းကတောင် ကျွန်မတို့ရွာမှာ ပြည်သူ့စစ်ခေါင်းဆောင် လုပ်နေပြီး ကျွန်မတို့ ABSDF တပ်တွေ အမြဲတမ်း ၀င်ဖမ်းဖို့ပြောနေလို့ ဦးလေးကို ပြည်သူ့စစ်ခေါင်းဆောင် မလုပ်ပါနဲ့လို့ လူကြုံတိုင်း အကြိမ်ကြိမ် ကျွန်မ မှာခဲ့ဖူးပါတယ်။ အဲဒီတုန်းက ဦးလေးတယောက်တည်းမကဘူး ရွာတိုင်းနီးပါးမှာ ပြည်သူ့စစ်ခေါင်းဆောင်ဆိုသူတွေက ကျွန်မနဲ့ ဆွေမျိုးမကင်းသူတွေချည်းဖြစ်နေတော့ ကျွန်မတော်တော်လေးကို မျက်နှာပူခဲ့ရတယ်။ တခါတော့ အမေ တ၀မ်းကွဲအစ်မရဲ့ အမျိုးသား ကျွန်မနဲ့ ဘကြီး တော်သူတယောက်ကိုလည်း ပြည်သူ့စစ်ခေါင်းဆောင် လုပ်လို့ ကျွန်မတို့တပ်က တခါဖမ်းမိတော့ နောက်မလုပ်တော့ဘူးလို့ လက်မှတ်ထိုးခဲ့လို့ ပြန်လွှတ်လိုက်ပေမဲ့ ကျွန်မ တော်တော်လေးကို မျက်နှာပူခဲ့တာတော့ အမှန်ပဲ။ တကယ်တော့ ဒီခေတ်ဒီစနစ်မှာ လူလာဖြစ်ကြတဲ့ သူတွေအားလုံးက သတင်းလွတ်လပ်ခွင့်မရှိ၊ အခြေအနေတခုကို မိမိကိုယ်ပိုင်ဥာဏ်နဲ့ လေ့လာဆန်းစစ်ခွင့်မရှိဘဲ နီးရာလူပြောတာကိုပဲ ယုံနေရ၊ နီးရာဓါးကို ကြောက်နေရပြီး ခိုင်းတာလုပ်၊ ခေါ်ရင်လာ၊ ခံမပြောနဲ့ ဆိုတဲ့ခေတ်မှာ အာဏာရှင်တွေကလွဲရင် အားလုံးက ပြည်တွင်းစစ်ရဲ့ မြေစာပင်တွေသာ ဖြစ်ပါတယ်။
အခုလည်း ကြံ့ဖွံ့အာဏာရှင်တွေက ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် ဒီမိုကရေစီ ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုနဲ့ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုတွေရဲ့ အခန်းကဏ္ဍကို လစ်လျူရှုကာ ငါပြောတဲ့အတိုင်း လက်မခံရင် အားလုံးကို အမြစ်ဖြုတ်ပစ်မယ်ဆိုတဲ့ အကြံအစည်နဲ့ ခေတ်အဆက်ဆက်က ဆရာ့ဆရာကြီးတွေရဲ့ နည်းနာအတိုင်း ဖြတ်လေးဖြတ် စီမံကိန်းကို ပြန်လုပ်နေတယ်ဆိုတာ ကြားရတော့ ပြည်သူလူထုက မြေစာပင်ဖြစ်ရဦးမယ် ဆိုတာကို မြေကြီးလက်ခတ်မလွဲ သေချာနေပါတယ်။ ဟိုတုန်းကတောင် သူပုန်တွေက ဆေးဝါး၊ ရိက္ခာနဲ့ ဘဏ္ဍာငွေကို ပြည်သူလူထုဆီက အဓိက စုဆောင်းတာ မဟုတ်ဘဲ ထိုင်းကစုဆောင်းတာပဲ များလို့ ဖြတ်လေးဖြတ်ကြောင့် ပြည်သူလူထုသာ နစ်နာပြီး သူပုန်တွေမှာ ဘာမှမနစ်နာပါဘူး၊ ခုခေတ်မှာ သတင်းအချက်အလက်ကလည်း လူကိုယ်တိုင် တောတောင်ဖြတ်ပြီး လာသတင်းပေးမှ ရတဲ့ခေတ် မဟုတ်တော့လို့ ခုခေတ်ဆို သတင်းရဖို့ ပိုတောင်လွယ်ပါသေးတယ် ။ တော်လှန်ရေးဆိုတာ ပြည်သူလူထုက ပေါက်ဖွားလာတာဖြစ်လို့ တော်လှန်ရေးနဲ့ ပြည်သူလူထုကို ဖြတ်တောက်ပစ်လို့ မရနိုင်ပါဘူး။ ဖိနှိပ်မှု ရှိနေသရွေ့ တော်လှန်ရေးဆိုတာ ရှိနေမှာ ဖြစ်ပြီး စစ်မှန်တဲ့ ပြည်ထောင်စုကို မတည်ဆောက်နိုင်သေးသရွေ့ ဖြတ်လေးဖြတ် မကလို့ ဘယ်လို စီမံကိန်းပဲသုံးသုံး ပြည်တွင်းစစ်မီး ငြိမ်းမှာမဟုတ် သူပုန်ဆိုတာလည်း ပျောက်ကွယ်သွားမှာ မဟုတ်ဘဲ ပြည်သူလူထုပဲ မြေစာပင် အဖြစ်နဲ့ အမြဲခံနေရလိမ့်မယ်။
ဖြတ်လေးဖြတ်ကြောင့် ပြည်တွင်းစစ် ငြိမ်းသွားမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ နိုင်ငံရေးပြဿနာကို နိုင်ငံရေးနည်းနဲ့ ဖြေရှင်းမှသာ ငြိမ်းမှာ ဖြစ်တယ်။ စစ်တပ်က နိုင်ငံရေးပြဿနာကို မဖြေရှင်းဘဲ ဗြောင်ကျကျ အဓမ္မ စိုးမိုးနေသရွေ့ နိုင်ငံမှာ လူမျိုးစုတွေနဲ့ ပြည်တွင်းစစ် ဆက်ဖြစ်နေဦးမယ်၊ ဒီမိုကရေစီကို တကယ်မြတ်နိုးသူတွေနဲ့ အာဏာရှင်ကြားမှာလည်း နိုင်ငံရေးပြဿနာတွေ ဆက်ရှိနေဦးမယ်။ အခုလက်ရှိထက် ပိုမိုဆိုးရွားတဲ့ ပဋိပက္ခတွေ ဆက်ရှိနေမယ်။ အရေးအခင်းတွေ နောက်ထပ် အများကြီး ပေါ်လာပြီး ပဋီပက္ခတွေ ဆက်ဖြစ်နေမယ်။ တိုင်းပြည် မငြိမ်းချမ်းသရွေ့ တိုင်းရင်းသားအချင်းချင်း၊ မောင်နှမအချင်းချင်း သူငယ်ချင်းအချင်းချင်း ရန်သူဖြစ်နေရတဲ့ အဖြစ်တွေ ဆက်ဖြစ်နေမယ်။ တိုင်းပြည်က ပိုပြီး ဆင်းရဲသထက် ဆင်းရဲလာမယ်။ ပြည်သူလူထုတွေမှာ အတင်းအဓမ္မ နေရာ ဒေသတွေ ပြောင်းရွှေ့ခံရ၊ လမ်းတွေတံတားတွေ ဆောက်လုပ်ရာမှာ အဓမ္မအခေါ်ခိုင်းခံရ၊ လက်နက်ကိုင် အင်အားစုတွေရှိတဲ့ဆီ အမြဲတမ်း စစ်ကြောင်းထိုးနေမှာ ဖြစ်ပြီး စစ်ကြောင်းထိုးတိုင်း ပြည်သူလူထုက ပေါ်တာအဖြစ် ဖမ်းဆီးခိုင်းစေခံရတဲ့ဘ၀က ဘယ်တော့မှ ရုန်းထွက်နိုင်မှာ မဟုတ်ဘူး။ ဒီလိုဘ၀က လွတ်မြောက်ဖို့ဆိုရင် စစ်ကျွန်ဘ၀ကို တပြည်လုံး တွန်းလှန်ပြီး အဆုံးသတ်ကာ စစ်မှန်တဲ့ ဒီမိုကရေစီ ရပြီး မြန်မာပြည်မှာ တိုင်းရင်းသား လူမျိုးပေါင်းစုံအတွက် အာမခံချက်ရှိတဲ့ ပြည်ထောင်စုတခု ပေါ်ပေါက်လာအောင် ကြိုးစားဖို့လိုပါတယ်။
လွန်ခဲ့တဲ့ အနှစ်သုံးဆယ်ခန့်က ဖြတ်လေးဖြတ်ကို ရင်ဆိုင်ရတဲ့အချိန်မှာ ကျွန်မက အခုကျွန်မသားရဲ့ အသက်အရွယ် ဖြစ်တာကို သတိထားမိပြီး မြန်မာပြည်သူလူထုရဲ့ စစ်ကျွန်ဘ၀က လွန်ခဲ့တဲ့အနှစ် သုံးဆယ်ခန့်ကနဲ့ အခုဘာမှ မကွာပါလားလို့ သတိထားမိသလို ရွာသားတွေရဲ့ ဒုက္ခကတော့ အရင်ကထက် အခုပိုဆိုးလိမ့်မယ်ဆိုတာကို တွေးနေမိတယ်။ ကျွန်မသားအရွယ်က ကျွန်မ ကြုံတွေ့ရတဲ့ ဒီအနိဌာရုံ ဒုက္ခကို အခုချိန်မှာ ကျွန်မသား မခံစားရလို့ ၀မ်းသာပေမဲ့ ဒီဒေသမှာ ရှိနေတဲ့ ကျွန်မသားအရွယ် ကလေးတွေနဲ့ ပြည်သူလူထုတွေကတော့ ကျွန်မငယ်ငယ်တုန်းက မဆလခေတ် ဖြတ်လေးဖြတ်ထက် နအဖနဲ့ ကြံဖွံ့ခေတ် ဖြတ်လေးဖြတ် အတွေ့ကြုံက ပိုပြီး ခါးသီးစွာ ခံစားရလိမ့်မယ်ဆိုတာကို တွေးနေမိတယ်။ ဒါကြောင့် စစ်အာဏာရှင်စနစ် ချုပ်ငြိမ်းပြီး ဒီကလေးတွေရဲ့ဘ၀ ငြိမ်းချမ်းတဲ့ ခေတ်စနစ်ကို အမြန်ရောက်ပါစေ၊ ကျွန်မဦးလေးတို့ အစ်ကိုတော်သူတို့ အပါအ၀င် ပြည်တွင်းစစ်မှာ မြေစာပင် ဘ၀ကို ရောက်ရသူတွေလို နောက်ထပ် ဘယ်သူမှ ထပ်အဖြစ်မခံရပါစေနဲ့လို့ ဆုတောင်းပါတယ်။
မြန်မာပြည်မှာ စစ်မှန်သော ဒီမိုကရေစီနှင့် ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကို တည်ဆောက်နိုင်ပါစေ
Posted in: ခံစားမှု,ဆုတောင်း,ဆောင်းပါး
May 29, 2011 at 6:09 AM Reply
၁၉၆၂မှာ ဗမာကို မုန်းလို့ဆိုပြီး တိုင်းရင်းသားတွေက မြန်မာပြည်မှ ခွဲထွက်ရန် ကြိုးပမ်းမှုကြောင့် စစ်တပ်သည် အဏာသိမ်းခဲ့ရသည်။ ငါတို့အဏာ သိမ်းရန် အခွင့်အလမ်းကို ဖန်တီးပေးခဲ့သူ တိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင်များနှင့် ခွဲထွက်ခွင့်ပေးတဲ့ ပင်လုံစာချုပ်ကို ကျေးဇူးတင်သည်။ တရုတ်ကြီးကို သရဏံ ဂစ္ဆာမိ။ တိုင်းရင်းသား ခေါင်းဆောင်များကို သရဏံဂစ္ဆာမိ။ ပင်လုံစာချုပ်ကို သရဏံ ဂစ္ဆာမိ။ ပြည်တွင်းစစ်ကြီး သက်ဆိုးရှည်ပါစေ။
May 29, 2011 at 6:41 AM Reply
တိုင်းရင်းသားတွေက မ”အ”ဘူး။ ဗမာတွေကပဲ “အ” တာ။ ဗမာတွေ တိုင်းရင်းသားတွေ ဆီမှာ စာသွားသင်ပါ။ တိုင်းရင်းသားတွေက သိပ်ပြီး ပါးနပ်တယ်။ သူတို့ ခေါင်းဆောင်တွေက ဗမာတွေကို ဘယ်လောက်ပဲ သတ်သတ် မသိဟန်ဆောင်ကြတယ်။ သူတို့ခေါင်းဆောင်တွေ ဘိန်းစိုက်၊ မုဒိမ်းကျင့်လဲ ခွင့်လွတ်ကြပါတယ်။ ဗမာခေါင်းဆောင်တွေ နည်းနည်းလေး မှားလုပ်တာနဲ့ အော်ကြ ဆူကြတာ တိုင်းရင်းသားတွေပဲ။ တိုင်းရင်းသားတွေက အဲလောက်အထိ လိမ္မာပါးနပ်ကြပါတယ်။
ဘဘပြောပြမယ် မြေးမလေး ငယ်နိုင်။ တိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ လေးစားစရာ ကောင်းတဲ့ စိတ်ဓါတ်ကို အတုယူပါကွယ်။ ဖြတ်လေးဖြတ်ဆိုတာက တိုင်းရင်းသားတွေ ဒုက္ခရောက်တာပဲ။ တိုင်းရင်းသားတွေ ဒုက္ခရောက်တာကို မသိသလို နေလိုက်ပါ။ ဘဘကြီးက ဗမာအစစ်ပါ။ ဗမာခေါင်းဆောင်တွေ ဘယ်လောက်ပဲ ဆိုးဆိုး ဗမာတွေက အပြစ်မပြောရဘူး။
May 29, 2011 at 6:44 AM Reply
ဘဘပြောပြမယ် မြေးမလေး ငယ်နိုင်။ တိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ လေးစားစရာ ကောင်းတဲ့ စိတ်ဓါတ်ကို အတုယူပါကွယ်။ ဖြတ်လေးဖြတ်ဆိုတာက တိုင်းရင်းသားတွေ ဒုက္ခရောက်တာပဲ။ တိုင်းရင်းသားတွေ ဒုက္ခရောက်တာကို မသိသလို နေလိုက်ပါ။ ဘဘကြီးက ဗမာအစစ်ပါ။ ဗမာခေါင်းဆောင်တွေ ဘယ်လောက်ပဲ ဆိုးဆိုး ဘယ်လောက်ပဲ မတရားတွေလုပ်လုပ် ဗမာတွေက အပြစ်မပြောရဘူး။
May 29, 2011 at 7:45 AM Reply
ဟုတ်ပါတယ် အစိုးရဲ.ဖြတ်လေးဖြတ်နည်းလမ်းက ပြည်သူတွေကိုအကျိုးမဖြစ်စေပါဘူး။ မငယ်နိုင်တို.လို အစိုးရဲ. ဖြတ်လေးဖြတ်လုပ်ခံနေရတဲ. အခြားသူများကို ကျောခိုင်းကိုယ်လွတ်ရုန်းပြီး နိုင်ငံခြားကို ဒုက္ခသည်အမည်ခံကာ သူများနိုင်ငံသားခိုင်းတာ သွားလုပ်ခြင်းသည်သာ မြန်မာပြည်သူအားလုံးကို အကျိုးပြုစေတာပါ
May 29, 2011 at 7:54 AM Reply
သိပ်ပြီးရိုးသားတဲ့ ကရင်ဘိုးတော်ကြီးရေးထားတဲ့ စာကို ဖတ်ကြည့်ပါဦးဗျာ။ ခေါင်းစဉ်လေးကို ကြည့်တော့ ကရင် သူပုန်ကို ပြစ်ပြစ်နစ်နစ် ဝေဖန်တော့မယ်ဆိုတဲ့ အထာပဲ။ ဗမာတွေ နအဖကို ဝေဖန်သလိုမျိုး ရေးထားသလားလို့ အထင်ကြီးပြီး ဖတ်လိုက်ပါတယ်။ ဗမာတွေ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ဝေဖန်သလို ပြစ်ပြစ်နစ်နစ်ပြောလေမလားလို့ ဖတ်လိုက်ပါတယ်။ ဟိဟိ။ နောက်ဆုံးတော့ ကရင်အချင်းချင်း မြှောက်ပင့်ထားတာ ဖြစ်နေတယ်။ သူတို့ ကရင်တွေ ရေးလိုက်တိုင်း ကရင် သူပုန်တွေ ဆိုးချက်တစ်ခုမှ မရှိဘူး။ ကရင် သူပုန်တွေ လုပ်သမျှ ကောင်းတာချည်းပဲ ဆိုပဲ။ ကရင်တွေက ရိုးရိုးသားသားလေးတွေဆိုတော့ အမှန်အတိုင်းပဲပြောတာနေမှာပါ။ ကရင်သူပုန်တွေ လူမျိုးရေး အခြေခံပြီး ဗမာတွေကို သတ်တာတွေ။ ကရင်အချင်းချင်း မတရားလုပ်တာတွေ မရှိလို့ပဲမရေးတာဖြစ်မှာပါ။ ရိုးသားတဲ့ တိုင်းရင်းသားတွေကို အထင်မလွဲပါနဲ့နော်။
ကရင်သူပုန်တွေ သေနတ်ကြီးကိုင်ထားပြီး လုပ်ချင်တိုင်း လုပ်လို့ရတဲ့ နယ်စပ်မှာ အဲလောက် ရိုးသားဖြူစင်နေတာ သာမန်လူတော့ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ သူတော်စင်တွေပဲ ဖြစ်ရမယ်။ (ကရင် သူပုန်သေရင် ငရဲမလားဆိုတဲ့ ဆောင်ပုဒ်လေးတောင် ရေးရမလိုပဲ) ဟဲဟဲ.. သူပုန်တွေက ဘုရားထက်တောင် ဖြူစင်နေသလိုပဲ။ ကရင်တွေ ဘုရားကို မကိုးကွယ်ပါနဲ့တော့။ ဘုရားစင်ပေါ်မှာ ကရင် သူပုန်တွေရဲ့ ဓါတ်ပုံကို တင်ပြီးကိုးကွယ် ကြပါကွာ။
May 29, 2011 at 2:21 PM Reply
May 29, 2011 at 6:37 PM Reply
Mg- ကိုယ့်အတွေ့အကြုံနဲ့ ကိုယ်ပြန်နှိုင်းနေတယ်ထင်တယ်။ သူများခိုင်းတာကို လုပ်ရလောက်အောင် ငယ်နိုင်ရောက်နေတဲ့ နိုင်ငံမှာ စစ်တပ်လို သွေးတသံတမိန့် စနစ်နဲ့ အလုပ်လုပ်တာ မဟုတ်ဘူး။ ကိုယ့်ရွေးချယ်မှုနဲ့ကိုယ် ကိုယ်ကြိုက်တာကို ရွေးချယ်ပိုင်ခွင့် ရှိတယ်။ ဘယ်သူ့ကိုမှ ကြောက်စရာ ကပ်ဖါးယပ်ဖါးလုပ်စရာ လာတ်ထိုးစရာမလိုဘဲ၊ အဂတိတရားကို ဦးတည်စေတဲ့ ဒုစရိုက်ဆယ်ပါး ကင်းကင်းနဲ့ ထမင်းတလုပ်ကို ၀အောင်ရှာစားလို့ရတဲ့အပြင် တခြားသူတွေကိုတောင် ပြန်ကူညီလို့ရသေးတယ်။ ကိုယ့်ထက်သာသူကို မနာလို ဖြစ်နေတာ မဟုတ်ရင် မုဒိတာပွားစမ်းပါ၊
Anonymous (May 29, 2011 2:21 PM) ရေးထားတာ ဘာမှားနေလဲ။ မှားနေတယ်ထင်တဲ့အချက်ကို ဘယ်အချက်မှာ ဘယ်လို ဘာကြောင့် ဆိုတာ ယဉ်ယဉ်ကျေးကျေးနဲ့ တိတိကျကျ ဆွေးနွေးပြီး ထောက်ပြပါ။ အရေမရအဖတ်မရ (သို့) ပုဆိန်ပေါက် ပေါက်တူးပေါက် ဆိုရင်တော့ ကျွန်မ ပြန်ပြီးအဖက်လုပ်မှာ မဟုတ်ဘူး။ သဘောထား မတူရင်တောင်မှ ဘယ်တုန်းက ဘယ်လိုရေးထားတာကို ဖတ်ဖူးတယ်ဆိုတာ ခေါင်းထဲမှာ နည်းနည်းတော့ ကျန်နေနိုင်တဲ့အတွက် သဘောထား တူသည်ဖြစ်စေ၊ မတူသည်ဖြစ်စေ ဖတ်သွားတယ်ဆိုရင် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
May 30, 2011 at 1:22 AM Reply
ဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုသွားပါပြီဆိုတဲ့ ဦးသိန်းစိန်ဒီလိုမိန့် ခွန်းပြောရဲလား
U Nay Meinda (ပေးပို့ သူ eimmet mahotpar )
ဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုသွားပါပြီဆိုတဲ့ ဦးသိန်းစိန် ၀န်ကြီးချုပ်ဦးနုကဲ့သို့ ဒီလိုမိန့် ခွန်းတွေပြောရဲလား
၁။နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဟာ လူတစုသာပိုင်တဲ့ ပစ္စည်းမဟုတ်ဘူး။ နိုင်ငံသူ
၂။ဒီလိုပိုင်တာကြောင့် နိုင်ငံသူနိုင်ငံသား လူများစုက ကြည်ကြည်ဖြူဖြူ
ရွေးကောက်တင်မြောက်ခြင်းကို ခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သို့မဟုတ် အဖွဲ့ကသာလျှင်
၃။အုပ်ချုပ်တဲ့အခါ ထင်သလို အရမ်းမအုပ်ချုပ်ရဘူး။ပြည်သူလူထုက
ကြည်ကြည်ဖြူဖြူ ရွေးကာက်တင် မြောက်ထားတဲ့ အမတ်တွေက ရေးဆွဲပြီး
အတည်ပြုပြဌာန်းထားတဲ့ ဥပဒေအရ တိုက်ဖျက်ပိုင်ခွင့် အစရှိတဲ့ ပြည်သူလူထု
တရပ်လုံးရဲ့ မွေးရာပါမူလ အခွင့်အရေးများကို ခိုင်ခိုင်လုံလုံ အာမခံထားတဲ့
၄။ပြည်သူလူထုဟာ ဂုဏ်သိက္ခာ ရှိတဲ့လူတွေလို နေနိုင်အောင် လွတ်လပ်စွာ
ဟောပြောခွင့်၊ ကိုးကွယ်ခွင့်၊ စီးပွါးရှာဖွေခွင့်၊
တိုက်ဖျက်ပိုင်ခွင့် အစရှိတဲ့ ပြည်သူလူထု တရပ်လုံးရဲ့ မွေးရာပါမူလ
အခွင့်အရေးများကို ခိုင်ခိုင်လုံလုံ အာမခံထားတဲ့ ဥပဒေတွေရှိရမယ်။
၆။ပြည်သူလူထု လူများစုရဲ့ ထောက်ခံမှုကို မရတဲ့ အစိုးရအဖွဲ့ ဟာ
အလိုအလျောက် ရာထူးကနှုတ်ထွက် ပေးရမယ်။
၇။အခုပြောခဲ့တဲ့ အဓိကအချက်တွေကို လက်ခံနိုင်တဲ့ နိုင်ငံရေးသဘောတရားဟာ
တရားမျှတခြင်း၊ လွတ်လပ်ခြင်း၊ ညီမျှခြင်းဆိုတဲ့ လောကပါလတရားတွေကို
အခြေခံထားတဲ့ သဘောတရားဖြစ်တယ်။ ဒီသဘောတရားကို ဒီမိုကရေစီလို့ခေါ်တယ်။
ဒီမိုကရေစီ မရှိတဲ့နိုင်ငံမှာ လူဖြစ်ရတာဟာ ဂွေးသင်းခံထားရတဲ့
နွားဖြစ်တာနဲ့အတူတူပါပဲ။ မခြားနားပါဘူး ။ အဲဒါကြောင့်
ပြည်သူလူထုကြီးခင်ဗျား အခုတက်လာတဲ့ အစိုးရသစ်ဟာ ခုဖေါ်ပြခဲ့တဲ့
စဉ်းစားဝေဖန်ဆုံးဖြတ်၍ မညီပါက ဒီမိုကရေစီရရှိရေးအတွက်အားလုံး
မှတ်ချက်။ ။ ၀န်ကြီးချုပ်ဟောင်း ဦးနု ရေးတဲ့ တာတေစနေသားစာအုပ်မှ ကူးယူဖေါ်ပြပါသည်။
May 31, 2011 at 12:32 AM Reply
အပေါ်က ထောပနာပြုတာတွေ တွေ့ပေမယ့် မအားသေးလို့ ခုမှထပ်လာတာပါ ။ ကလေးတွေကနေ သူတို့လိုချင်တဲ့ ဖြစ်စေချင်တဲ့ ဆန္ဒတွေနဲ့ မကိုက်လို့ ထေ့ငေါ့တာကိုတော့ ဘယ်လိုပြောရမှန်း မသိတော့ပါဘူး ။ ကော်ပီကူးပြီးတော့သာ ကျနော့်ပို့စ်အောက်မှာ လာဖတ်သူတွေဖတ်လို့ရအောင် ယူသွားပါရစေ ။
နောက်အောက်က ကွန်မန့်ကလည်း အပေါ်ကတစ်ယောက်နဲ့ အတူတူလား နှစ်ယောက်များလားတော့ မသိဘူး ၊ ဖြတ်လေးဖြတ်ကို ကိုယ်တိုင်ကြုံတွေ့ခံစား ခဲ့ရပါလို့ ရေးပါတယ်ဆိုမှ “ကျားကိုက်တာ အပေါက်ကလေးနဲ့လား” လို့ လာလုပ်နေပုံထောက်တော့ ဆေးတော့မှီမယ် မထင်ဘူး ။
မငယ်နိုင် (ထိန်းထိန်းသိမ်းသိမ်း) ရေးထားတာတွေကို ကျနော်လည်း သဘောပေါက်ပါတယ် ။ ဒါမှမဟုတ်ပဲ ပွဲဆူအောင် ကောက်သင်းကောက် အပြစ်လိုက်တင်နေရင် ဘယ်သူမှ ကောင်းနိုင်စရာ မရှိတော့ပါဘူး ။ ဒီလို ထိန်းသိမ်းပြီး ရေးထားတာတွေကိုက အချို့လူတွေအတွက် ပြဿနာကြီးတစ်ခု ဖြစ်နေတတ်တာတော့ မတတ်နိုင်ဘူးပေါ့ဗျာ ၊ စိတ်ဖြေရတာပေါ့ ။
ကျနော်ကတော့ မီးမွှေးဖို့ထက် အားလုံးအတွက် အကောင်းဖက် ဦးတည်လာနိုင်အောင် ဝေဌသွားနိုင်ဖို့ မျှော်လင့်မိပါတယ် ။ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် မငယ်နိုင်တို့ဖက်မှာ ဒုက္ခရောက်ခဲ့ကြသူတွေ ၊ ရောက်နေတဲ့သူတွေ အားလုံးအတွက် စိတ်မကောင်းပါဘူး ။
May 31, 2011 at 1:08 AM Reply
ကိုမန်းကိုကို - တချို့က နှောင့်ယှက်ချင်လို့ လာရေးတဲ့သူတွေ ရှိတော့ အားလုံးကို ကျွန်မ မလိုအပ်ဘဲနဲ့ ဘာမှပြန်မပြောတော့ဘူး။ အခြေအနေ ဆိုးဆိုးကြီးဖြစ်ရင် ဖျက်လိုက်မယ်။ တော်ရုံဆိုရင်တော့ ထားလိုက်ပါတယ်။ ကျွန်မ တင်ပြထားတာက ပြည်တွင်းစစ်ကြောင့် ဖြစ်နေတဲ့ အနိဋ္ဌာရုံထဲက တခုသာဖြစ်ပြီး ပြည်တွင်းစစ်ရဲ့ တရားခံက ဘယ်သူဆိုတာ သိပေမဲ့ ကျေးလက်ဒေသတွေမှာ ပြည်တွင်းစစ်ကြောင့် တပ်နှစ်တပ်ကြားမှာ ပြည်သူလူထု ဘယ်လို ဒုက္ခရောက်နေတယ်ဆိုတဲ့ ကိုယ်တိုင်ကြုံတွေ့ ခံစားရတာကို ပြန်တင်ပြတာသာ ဖြစ်တယ်။
May 31, 2011 at 1:49 AM Reply
ဟေ့ကောင်တွေ… နအဖ အတင်းကို မပြောကြနဲ့။ ဗမာလူမျိုး ဦးသန်းရွှေကြီးရဲ့ အတင်းကို ပြောနေတာ ရပ်ပေးပါ။ ငါတို့ဗမာတွေက လူမျိုးရေးပဲ ကြည့်တယ်။ ဗမာလူမျိုး ဦးသန်းရွှေကို ဝေဖန်ရင် ဆတ်ဆတ်ထိမခံ ဖြစ်တယ်ကွ။ ဗမာလူမျိုး နအဖကို မကောင်းပြောရင် အရမ်းကို ဒေါသထွက်တယ်နော်။ ဗမာတွေက မြှောက်ပင့်ပြောမှ ကျေနပ်တာ။ ငါတို့ ဗမာတွေက မင်းတို့ တိုင်းရင်းသားတွေကို အရမ်းကိုမုန်းတယ်။ ဒါပေမယ့် ငါတို့က လူမျိုးရေး ဘယ်လောက်ပဲ မုန်းတီးနေပါစေ .. လူမျိုးရေး ဘယ်လောက်ပဲ အမြင်ကျဉ်းနေပါစေ. . . ရိုးသားဖြူစင်တဲ့ ဗမာတွေလို့ မြှောက်ပြောရင် အရမ်းကို ကျေနပ်တယ်။ များများမြှောက်လေ များများကြိုက်လေပဲ။ ဗမာဘလော့တွေမှာဆိုရင် ဗမာခေါင်းဆောင်တွေကို ဘုန်းတော်ဖွဲ့ပြီး အကောင်းတွေပဲ ရေးကြတယ်လေ။ တွေ့တယ် မဟုတ်လား? ၀ါးဟားဟား။
May 31, 2011 at 6:58 PM Reply
29 May 11, 11:07 PM
ဖြတ်လေးဖြတ်: နေ၀င်းလက်ထက် ၁၉၆၅ မှ ၈၃ ခုနှစ်အထိ ဗမာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီနှင့် KNU အပေါ် နေ၀င်းရဲ့ ခါးပိုက်ဆောင် စစ်တပ်က ဖြတ်လေးဖြတ် ပုံစံနဲ့ ထိုးစစ်ဆင်ခဲ့တာပါ။
29 May 11, 11:02 PM
ဖြတ်လေးဖြတ်: ဖြတ်လေးဖြတ် = (၁) ရိက္ခာဖြတ် (၂) ဘဏ္ဍာငွေဖြတ် (၃) သတင်းအဆက်အသွယ်ဖြတ် (၄) လူထုနှင့်အဆက်အသွယ်ဖြတ်
29 May 11, 08:46 PM
May 31, 2011 at 10:00 PM Reply
မြန်မာပြည်နဲ့ ဖက်ဒရယ်စနစ်နဲ့မကိုက်ညီပါဘူး။အသုံးမကျရင် တိုင်းပြည်က အစိတ်စိတ် အမွှာမွှာကွဲသွားနိုင်တယ်။
ဖက်ဒရယ်စနစ်မကျင့်သုံးလည်း တိုင်းရင်းသားအခွင့်ရေးတွေရှိနေတဲ့ ဒီမိုကေ၇စီစနစ်တစ်ရပ်ရှိနေ ကျင့်သုံးနေရင်လည်း အတူတူပါပဲ။အခုကျင့်သုံးနေတဲ့စနစ်ဟာလည်း တိုင်းရင်းသားအခွင့်ရေးများစွာကို ပေးထားတဲ့အတွက် တော်တော်များများပြည့်စုံနေပါတယ်။ကိုယ့်ပြည်နယ်ကို ကိုယ့်လူမျိုး ၀န်ကြီးချုပ်တွေပဲ အုပ်ချုပ်ပြီး ဘာသာရေး ယဉ်ကျေးမှု စာပေ ပညာရေး စီးပွားရေး ဥပဒေရေးရာ ကဏ္ဍများစွာကို အာဏာခွဲဝေပေးထားပြီးသားပါ။
နောင်အစိုးရ ဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ် ဖက်ဒရယ်စနစ်ကို ဘယ်သူမှကျင့်သုံးမှာမဟုတ်ပါဘူး။ဒေါ်စုတတ်လာလည်း ဖက်ဒရယ်စနစ်ကို ဒေါ်စုကသုံးရင်တောင်မှ ကျန်တဲ့သက်ဆိုင်တဲ့သူတွေ နားလည်သိတဲ့ပြည်သူတွေ ၀ါရင့်နိုင်ငံရေးသမားကြီးတွေကတော့ လက်ခံမှာမဟုတ်ပါဘူး။
May 31, 2011 at 10:30 PM Reply
မင်းတို့က ဘယ်လောက်ပဲ အခြေအနေဆိုးနေ ဆိုးနေ ဘယ်တုန်းက မြန်မာပြည်က အခြေအနေကို အမှန်အတိုင်း ပြောဖူးလို့လဲ။ ဒီလိုပဲ ပြောမယ်ဆိုတာ သဘောပေါက်ပါတယ်။ ဒါကလည်း မင်းတို့က စစ်အာဏာရှင်အဆက်ဆက် ရိုက်သွင်းထားတာကိုပဲ သိထားတာကိုး၊ ဒါမှမဟုတ် ကပ်ဖဲ့ပြောနေတာကိုး။ စကားအနိုင်လိုချင်လို့ ကပ်ဖဲ့ပြောနေတာ မဟုတ်ရင် အပြင်မှာ တကယ် ဖြစ်နေတာကို မြို့ပေါ်ကလူတွေနဲ့ ရုရှားမှာ ပညာသင်တဲ့ mg တို့ ဘယ်သိနိုင်မလဲ။ Local area မှာနေတဲ့သူတွေနဲ့ အဲဒီမှာ တကယ်ခံစားနေရတဲ့ သူတွေပဲ သိပါတယ်။ အဲဒီမှာ တကယ်ခံစားရတဲ့သူအချင်းချင်း တူရင်တောင်မှ ငယ်နိုင်တို့လို မှိုင်းတိုက်ခံရဖူးတဲ့သူတွေနဲ့ တခြားသာမန်လူတွေ သိတာက မတူသေးဘူး။ ဘယ်သူမဆို မသိခင်မှာ မိမိထင်သလို ထင်နိုင်တယ်၊ တကယ် မျက်ဝါးထင်ထင် တွေ့မြင်ဖူးတဲ့နေ့မှာ ဘယ်တုန်းက ငယ်နိုင် (သို့) ဘယ်သူရေးထားတဲ့စာမှာ ဖတ်ဖူးသလိုပါလားလို့ တနေ့ တကယ်တွေ့လို့ သိလာရင် အမှန်ကို လက်ခံနိုင်တဲ့ နှလုံးသားရှိပါစေလို့ပဲ ဆုတောင်းပါတယ်။ အခုဒီမို့စ်မှာ ရေးထားတာတွေက အာဏာရှင် မှိုင်းတိုက်ခံရဖူးတဲ့ ငယ်နိုင်က တကယ်ကြုံတွေ့ဖူးတာကို ပြန်ရေးထားတာ ဖြစ်တယ်။ လူဖတ်ကောင်းကောင် လုပ်ကြံရေးထားတာ တခုမှမရှိဘူး။ ဒီအခြေအနေတွေက လွန်ခဲ့တဲ့ အနှစ်သုံးဆယ်ခန့်ကလည်း ဖြစ်နေတယ် အခုလည်း ဆက်ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာ မကြုံဖူးသူတွေကို ပြောပြတာသာ ဖြစ်တယ်။ တိုင်းရင်းသားတွေ တန်းတူ အခွင့်အရေး ရှိသွားပြီဆိုတာ အခုမှ ပြောတာ မဟုတ်ဘူး။ ချင်းဝိဒေသတိုင်းကို ချင်းပြည်နယ်၊ တနင်္သာရီ ကမ်းမြောင်ဒေသကို မွန်ပြည်နယ်၊ ကရင်ပြည်နယ် တနင်္သာရီတိုင်းစသည်ဖြင့် ခွဲပေးလိုက်တဲ့ ၇၄ ဖွဲ့စည်းပုံကို အတည်ပြုကတည်းက တိုင်းနဲ့ပြည်နယ် ၁၄ ခုကို ကိုယ်စားပြုပြီး ကြယ်ဖြူ ၁၄ လုံးအလံနဲ့ တန်းတူညီတူဖြစ်သွားပြီဆိုပြီး လိမ်လာခဲ့တာကို ငယ်နိုင်ကိုယ်တိုင် ယုံလာခဲ့သူပါပဲ။ ဒါပေမဲ့ အခုဒီမှာတော့ mg ကို ဒီလောက်ပဲ ဆွေးနွေးမယ်၊ ဒေါက်တာလွမ်းဆွေဘလော့ဂ်က ပို့စ်တခုမှာ ဗမာနဲ့ မြန်မာကိစ္စမှာ ကပ်ဖဲ့ဆွေးနွေးဖူးပြီး ဒီမှာလည်း ဘာပို့စ်တင်တင် တည်တည်တံ့တံ့ ဆွေးနွေးဖူးတာ တခါမှမရှိဘဲ ပေါက်ကရတွေပဲ လာရေးနေသလို Anonymous နဲ့လည်း ယုတ်ယုတ်ရိုင်းရိုင်းတွေ လာထည့်နေလို့ ကပ်ဖဲ့ပြန်လုပ်မယ်ဆိုတာ သိလို့ mg ကို အချိန်ကုန်ခံ လက်ညောင်းခံပြီး အခုချိန်မှာ ဆက်ဆွေးနွေးဖို့တော့ မရှိဘူး။
သန်းရွှေ စီစဉ်တဲ့ ဒီပဲယင်း says:
June 1, 2011 at 12:41 AM Reply
မေ(၃၀) ဒီပဲယင်း နိုင်ငံတော် လုပ်ကြံမှုကြီး (၈)နှစ်ပြည့် ၀မ်းနည်းခြင်းအခမ်းအနားကို တိုကျို မြန်မာစစ်အခွန်ရုံး(သံရုံး)ရှေ့တွင် ယနေ့ နေ့လည် ၃း၀၀ မှ ၄း၄၅ နာရီထိ ဂျပန်ရှိ ဒီမိုကရေစီ အင်အားစုများမှ ကျင်းပသည်။ မြန်မာနိုင်ငံသမိုင်းတွင် စစ်လက်နက်အားကိုးဖြင့်တိုင်းပြည်အာဏာကို မတရားရယူ၍ အစိုးရအမည်ခံအုပ်ချုပ်နေ သော နအဖ စစ်အာဏာရှင်တို့ ၏ အရုပ်ဆိုးအကျည်းတန်သော လုပ်ရပ်များစွာထဲမှ ထင်ရှားသောသွေးစွန်းလုပ်ရပ်တခုကို ထုတ်ပြပါဆို လျှင် မြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်း စစ်ကိုင်းတိုင်း ဒီပဲယင်းမြို့ ကျည်ရွာအနီးတွင် မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင် ကမ္ဘာ့ငြိမ်းချမ်းရေး နိုဘယ်လ်ဆုရှင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့်ပြည်သူပြည်သားတို့ အား နအဖ စစ်အုပ်စုက ၂၀၀၃ခုနှစ်မေလ ၃၀ရက်သောကြာ နေ့ ည လမိုက်ညတွင် တဘက်သတ် ခြုံခိုတိုက်ခိုက် ရိုက်နှက်သတ်ဖြတ်လုပ်ကြံကြသောသမိုင်းဝင် ကမ္ဘာသိ ဒီပဲယင်းအရေး အခင်းနေ့ ဟု ပြောရပါလိမ့်မည်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် NLD ဒုဥက္ကဌ ဦးတင်ဦး၊ လူကြီး လူငယ်တချို့အသက်ဘေးမှ လက်မတင်လေး လွတ်မြောက်ခဲ့သော်လည်း အပြစ်မဲ့ လက်နက်မဲ့ပြည်သူ ၁ဝဝ ကျော် သေပွဲဝင်ခဲ့ရသော ဒီပဲယင်းနေ့ မှာ ၈ နှစ် ပြည့်ပေပြီ။ ထိုသို့ တနှစ်တနှစ် တိုးကာ ကြာမြင့် လာသော်ငြားနိုင်ငံတော်လုပ်ကြံမှုဖြစ်သော ထိုအရေးအခင်းတွင် ပါဝင်ပတ်သက်ခဲ့ကြသော မြန်မာ့သမိုင်း စစ်ရာဇဝတ် ကောင် ၊ရဲရာဇဝတ်ကောင်၊ကြံ့ဖွတ် စွမ်းအားရှင် ရာဇဝတ်ကောင်တို့ သည်။ ယခုအထိ အမှုဖွင့် တရားစွဲဆိုခြင်း မခံရသေးဘဲ၊ လက်နက် မဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးလမ်းစဉ်ကို လိုက်နာကြသော အပြစ်မဲ့ပြည်သူတို့ နှင့်တကွ လူထုခေါင်းဆောင်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၊ ဦးတင်ဦး တို့ သည် တရားလိုအဖြစ်မှတရားခံအဖြစ် ရောက်နေကြရရှာသော ခေတ်ပြောင်းပြန် ခေတ်ပျက်ကြီးထဲက အမှန်တရား ပျောက်ဆုံးနေဆဲ ဒီပဲယင်းနေ့၈ နှစ်ပတ်လည်ဟုပင် ဆိုလိုက်ချင်တော့သည်။ သမိုင်းမှန်လျှင် ဖျောက်ဖျက်မရ။ သမိုင်းကို လူလုပ်သဖြင့် သမိုင်းမှန်ထဲတွင် အမှန်တကယ် ပါဝင်ပတ်သက်ခဲ့သော သက်ရှိထင် ရှား အသိဥာဏ်မချို့ ယွင်းကြသော လူတို့ ၏အသံသည် ကမ္ဘာအနှံ့ပဲ့တင်ထပ်ကာ ပျံ့ နှံ့ နေမည် အမှန်ပင်တည်း။
စစ်အာဏာရှင်တို့ က ဘယ်လိုပင် ဆင်သေကို ဆိတ်သားရေနှင့် ဖုံးကွယ် ပလေ့စေ။မဝေးလှသောအနာဂတ်တွင် အမှန်တရား ၏ တရားစီရင်မှုခုံရုံးရှေ့ တွင် မျက်မြင်သက်သေများ၏ ခိုင်လုံသော ထွက်ချက်များကြောင့် သမိုင်းဘီး တပတ် ပြန်လည်လျှက် ပြည်သူတို့ ကို တရားမဲ့စော်ကားခဲ့သော သွေးကြွေးတို့ ကို ပြည်သူ့ ခုံရုံး ကြိုးစင်ထက်တွင် အာဏာရှင်ဆာဒမ်ဟူစိန်ကဲ့သို့သန်းရွှေတို့ ငမိုက်သားတသိုက် လှလှကြီး ပြန်ပေးဆပ်ရဦးမည်ကို မြင်ယောင်နေသည်။
June 1, 2011 at 4:12 AM Reply
မဆဲပေမယ့် ဘဘော့ရှင်ကို အရေမရအဖတ်မရတွေ ငါ့စကားနွားရ ရေးပြီး အသားလွတ် တိုက်ခိုက်နေတဲ့၊ ကြောင်းကျိုးဆီလျော်မှု မရှိဘဲ ကဲ့ရဲ့နေတဲ့၊ သမိုင်းမှန်ကို မသိဘဲ ထင်ရာမြင်ရာ ပေါက်ကရတွေကို အမှားကို အမှန်လုပ်ပြီး သဘာဝမကျတဲ့ ဝေဖန်မှုတွေ လုပ်နေတဲ့ စစ်ခွေးများသို့ ...
တောကြို အုံကြားက လာပြီး နားမလည်၊ ပါးမလည်နဲ့ သခင်အားရ ကျွန်ပါးဝ စွတ်အော်မနေနဲ့..
ထမင်းစားပြီး ကိုယ်ပိုင် အသိဥာဏ် မရှိတဲ့ ကောင်တွေ..
ခုခေတ်မှာ အပေါဆုံးနဲ့ အသုံးမကျဆုံး လူတွေကို ထုတ်ပြပါ ဆိုယင် စစ်ဗိုလ်တွေဘဲ..
ပြည်သူ့ ဘက်သား says:
June 1, 2011 at 8:36 AM Reply
SV ဘလော့မှာ စီဘောက် ဖြုတ်ပစ်ထားပြီး ကော်မင့်မှာလဲ approval ခံထားလို့ SV ကို ဆဲလို့ မရတော့တဲ့ ရုရှက စစ်ခွေး တုတ်ကြီး တို့က မငယ်နိုင်ကို လာဆဲနေကြတာကိုး။
ရုရှက လူပေါ mg ကလဲ မငယ်နိုင်ဘလော့ကို တာဝန်တရပ်အနေနဲ့ လာလာပြီး အင်မတန် ညံ့ဖျင်းတဲ့ အတွေးအခေါ်တွေ၊ တက်တက်စင် လွဲချော်နေတဲ့ အချက်အလက်တွေ၊ ပေါချာချာ အရေးအသားတွေနဲ့ မငယ်နိုင်ကို တိုက်ခိုက်နေတုန်းပဲကိုး။
မငယ်နိုင်ကို ပက်ပက်စက်စက် ဆဲဆိုတာရယ်၊ ရိုင်းရိုင်းစိုင်းစိုင်း ပုတ်ခတ်စော်ကားတာရယ်၊ မငယ်နိုင်အကြောင်း မမှန်သတင်းတွေ လွှင့်ပြီး နာမည်ဖျက်တာရယ်၊ မငယ်နိုင် ရေးထားတဲ့ လယ်ပြင်မှာဆင်သွားသလို ထင်ရှားနေတဲ့ အမှန်တရားတွေကို မျက်စေ့ပိတ် ဇွတ်ငြင်းတာရယ်၊ အမှန်ကို အမှား၊ အမှားကို အမှန်လုပ်
ပြီး ဗြောင်လိမ်တာရယ်၊ အရေးပါတဲ့ အချက်ကြီးတွေကို ကျိုးကြောင်းပြ မငြင်းနိုင်ပဲ လုံးဝ အရေးမပါတဲ့ အသေးအဖွဲ အချက်လေးတွေကို ကြမ်းပိုးကို လိပ် ဖြစ်အောင် ချဲ့ကားပြီး ငြင်းချက်ညံ့ညံ့ ထုတ်တာရယ်၊ စကား အထအနကောက်ပြီး စကား ကပ်ဖဲ့ ပြောတာရယ်၊ သုံးစားလို့ မရတဲ့ ကော်မင့်တွေကို အလကားရတိုင်း ရေးတာရယ် ကို အချိန်အများကြီးပေးပြီး အားကြိုးမာန်တက် လာလာလုပ်နေလိုက်ကြတာ ဘုရားစူး ပညာတော်သင်စစ်ဗိုလ်တွေတဲ့ဗျာ။
ရုရှက စစ်ခွေး တုတ်ကြီး နဲ့ လူပေါ mg နဲ့ တယောက်ထဲလဲ ဖြစ်ချင်ဖြစ်မယ်။ ဒါမှမဟုတ် လူပေါ mg က တခါတလေ စစ်ခွေး တုတ်ကြီး နာမည် သုံးပြီး ဆဲတာ ဖြစ်ချင်လဲ ဖြစ်မယ်။ ဒါမှမဟုတ် စစ်ခွေး တုတ်ကြီး က တခါတလေ mg နာမည်သုံးပြီး ပေါကြောင်ကြောင် ကွန်မင့်တွေ ရေးတာလဲ ဖြစ်ချင်ဖြစ်မယ်။ ရုရှက စစ်ဗိုလ် ၄ - ၅ ယောက်က တုတ်ကြီး နာမည်သုံးပြီး ဆဲလိုက်၊ mg နာမည်သုံးပြီး ပေါတောတော ကြောင်တောင်တောင် ကော်မင့်တွေ ရေးလိုက် လုပ်နေတာလဲ ဖြစ်ချင်ဖြစ်မယ်။
စစ်ခွေး တုတ်ကြီး နဲ့ လူပေါ mg နဲ့ တယောက်ထဲပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ ၂ ယောက်ပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ ၄ - ၅ ယောက်ပဲဖြစ်ဖြစ် ဒီလို ရုရှက စစ်ဗိုလ်မျိုးတွေက နောင်တခေတ်ရဲ့ အောင်စစ်သည်တွေ ဆိုတော့ မြန်မာပြည်ရဲ့ အနာဂတ်က တွေးဝံ့စရာကို မရှိတော့ဘူးဗျို့။
စစ်ခွေး တုတ်ကြီး နဲ့ လူပေါ mg လို စစ်ဗိုလ်မျိုးတွေကို ပြည်သူ့ငွေ အကုန်ခံပြီး ရုရှကို ပညာတော်သင် လွှတ်ထားတယ် ဆိုတော့ စစ်ဗိုလ်တွေထဲမှာ စစ်ခွေး တုတ်ကြီး နဲ့ လူပေါ mg တို့ထက် ပိုပြီး ပညာတော်သင် လွှတ်သင့်တဲ့ လူ မရှိဘူး ဆိုတာကို ပြနေတာပေါ့။
June 1, 2011 at 9:25 AM Reply
ပိုစ်.အောက်မှာ ပိုစ်.နဲ.ဆိုင်တဲ.မှတ်ချက်ပဲပေးပါ မဟုတ်ရင်ဖျက်ပါမယ်လို. မငယ်နိုင်မကြာခဏ ပြောဖူးပါတယ် သတိထားကြပါ မလာတဲ. ဖအေ ကိုပဲ တ မနေကြပါနဲ.
June 1, 2011 at 2:39 PM Reply
ပြည်သူ့ ဘက်သားေ၇......
၇ဲဘော် ပြောတာ မှန်ပါတယ်.. နိုင်ငံေ၇းဘလော့တွေ အမြဲ ဖတ်နေတဲ့ ကျနော်တို့ကတော့ အစ်မငယ်နိုင်ကို အောက်တန်းကျကျ ဆဲဆိုနေတဲ့ စစ်ခွေးစစ်စစ်တွေကိုေ၇ာ၊ အစ်မငယ်နိုင်ကို မိန်းမလိုမိန်းမ၇ သိက္ခာချနေတဲ့ စစ်ကျွန်တွေကိုေ၇ာ၊ ဦးနှောက်ဆေးခံထား၇တဲ့ အလိမ်အညာစကားတွေကို အမှန်ထင်ပီး အဖြစ်မှန်နဲ့ ကင်းကွာနေတဲ့ အဓိပ္ပာယ်မ၇ှိတဲ့ စကားတွေကို ကိုးယိုးကားယား ဗ၇ုတ်သုတ်ခ ပြောနေတဲ့ စစ်နွားတွေကိုေ၇ာ သတိထားမိပါတယ်.. တကောင်မှ အဆင့်အတန်း၇ှိ၇ှိ ဆွေးနွေးနိုင်တဲ့ အဆင့်မ၇ှိလို့ ဝင်မပြောတာပါ.. အဲဒီ ၇ု၇ှားမှာ စာသင်နေတဲ့ စစ်ဗိုလ်တွေဟာ တုတ်ကြီး နာမည်နဲ့ဘဲေ၇းေ၇း၊ mg နာမည်နဲ့ဘဲေ၇းေ၇း၊ zaw နာမည်နဲ့ဘဲေ၇းေ၇း၊ hanzaw နာမည်နဲ့ဘဲေ၇းေ၇း၊ ဒေါ်လာစား နာမည်နဲ့ဘဲေ၇းေ၇း၊ Anonymous နာမည်နဲ့ဘဲေ၇းေ၇း ပြည်သူတွေ၇ဲ့ ဒီမိုကေ၇စီစိတ်ဓါတ် အပေါ်မှာ ဘာမှ အကျိုးသက်ေ၇ာက်မှု မ၇ှိပါဘူး.. ဘာလို့လဲဆိုတော့ အဲဒီ စစ်ဗိုလ်တွေဟာ စစ်အုပ်စုဖက်က နာပီး ပြည်သူတွေကိုတိုက်ခိုက်နေတဲ့ ကောင်တွေ ဖြစ်လို့ ဆဲဆဲမဆဲဆဲ ပြည်သူ့၇န်သူတွေချည်းပါဘဲ.. စစ်ဗိုလ်တွေထဲက ကောင်းတဲ့ စစ်ဗိုလ်တွေက အဲဒီလို စစ်အုပ်စုဖက်က ယောကျာ်းသိက္ခာ ကင်းမဲ့စွာနဲ့ လိမ်ညာ ကာကွယ်ပေးမနေပါဘူး.. ဒီတော့ ဒေါ်လာစား ၊ mg ၊ zaw ၊ hanzaw ၊ တုတ်ကြီးဆိုတဲ့ ပြည်သူ့၇န်သူတွေေ၇းချင်တာေ၇းနေတာတွေဟာ ခွေးလေးခုန်လို့ ဖုန်မထသလို ဖြစ်နေတော့ စစ်အုပ်စုကို ဆန့်ကျင်သူတွေအတွက် သူတို့၇ဲ့ အသိဥာဏ်မဲ့တဲ့ စကားတွေဟာ ဟာသလို ဖြစ်နေတာပေါ့.. ဒါပေမယ့် နိုင်ငံေ၇းဘလော့တွေကို တခါတလေမှ လာတတ်တဲ့ စာဖတ်သူတွေ၊ လူသစ်တွေ အတွက်တော့ ဒီဘလော့မှာ ကွန်မန့်ေ၇းနေသူတွေထဲမှာ ဘယ်သူတွေက ဆိတ်တွေ ဖြစ်ပီး ဘယ်သူတွေက နွားတွေ ဖြစ်တယ် ဆိုတာကိုတော့ ကွဲကွဲပြားပြား သိအောင် အစ်မငယ်နိုင်ေ၇ာ၊ စာဖတ်သူလူဟောင်းတွေကပါ လက်ဆင့်ကမ်း ပြောပြထားတာ သင့်တော်ပါတယ်.. ဒီလို ပြောပြပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးလဲ တင်ပါတယ်.. နို့မို့၇င် စစ်ခွေးတွေက ဆဲတာ၊ စစ်ကျွန်တွေက ခြေထိုးတာ၊ စစ်နွားတွေက ဝါဒဖြန့်တာကို ကိုယ့်ဖက်ကလူတွေက နားယောင်သွားပြီး အချင်းချင်းတွေ အထင်မှားတာ ဖြစ်နိုင်တယ်.. ဒါနဲ့ ပြည်သူ့ဘက်သား ပြောထားတဲ့ ပြည်သူ့၇န်သူ စာ၇င်းထဲမှာ zaw ကိုပါ ထည့်လိုက်ပါ..
People Power Movement 2012 says:
June 1, 2011 at 8:57 PM Reply
ရုရှက မင်းအဖေတွေက ဘလော့ရှင် တင်ထားတဲ့ ခေါင်းစဉ်နဲ့ မဆိုင်တာတွေ ရေးပြီး ဘလော့ရှင် နဲ့ ဘလော့ရှင်ရဲ့ သူငယ်ချင်း၊ မိတ်ဆွေ၊ အပေါင်းအသင်းတွေကို နာမည်ပျက်အောင် တိုက်ခိုက်နေတာတွေ၊ မိုးမွှန်အောင် ဆဲနေတာတွေ၊ ရိုင်းရိုင်းစိုင်းစိုင်း ပုတ်ခတ်စော်ကားနေတာတွေကျတော့ မင်း ပါးစပ်ပေါက်က ပိတ်နေပါလားကွ
(အတင်းအဖျင်းတောင် မက) မဟုတ်ကဟုတ်ကတွေကို စိတ်ကူးယဉ် ဖန်တီး ရေးပြီး ဘလော့ရှင်ကို နာမည်ဖျက်နေတဲ့ ရုရှက မင်းအဖေတွေ၊ အမေ အရွယ်၊ အဒေါ်အရွယ်လောက် ရှိတဲ့ ဘလော့ရှင်ကို ပျစ်ပျစ်နှစ်နှစ် ဆဲနေတဲ့ ရုရှက မင်းအဖေတွေ၊ ယုတ်ယုတ်ရိုင်းရိုင်း ပုတ်ခတ်စော်ကားနေတဲ့ ရုရှက မင်းအဖေတွေကို အမှန်တရားဖက်က ပြည်သူတွေက ပြန်ပြောသင့်လို့ ပြန်ပြောတာကျတော့ ဘာဖြစ်တယ်၊ ညာဖြစ်တယ် ဆိုပြီး အသံက ထွက်ထွက်လာပါလားကွ
မင်းက စစ်အာဏာရှင်ကို မျက်စေ့မှိတ် ထောက်ခံနေတဲ့ အလိုတော်ရိကောင် ဆိုတော့ စစ်အာဏာရှင်လိုဘဲ တဖက်သတ် ပြော၊ တဖက်သတ် လုပ်နေတာက ယိုသူမရှက်၊ မြင်သူရှက် ဖြစ်နေပြီကွ
June 1, 2011 at 9:37 PM Reply
Anonymous People Power Movement 2012 - zaw ကိုယ်တိုင်က ရုရှားက ပညာတော်သင်တဦး ဖြစ်ပြီး သူ့နာမည်နဲ့ကျတော့ ဆဲတဲ့စကားလုံးကို ရှောင်ပြီးစော်ကားတဲ့ မှတ်ချက်တွေ လာပေးနေတဲ့ သူတယောက်ပါ။ ဒီဘလော့ဂ်နဲ့ အာဏာရှင် အားပေးဘလော့ဂ်တွေမှာ နာမည်အမျိုးမျိုး (သို့) ကျွန်မနာမည်သုံးပြီး အရေမရအဖတ်မရ (သို့) ယုတ်ယုတ်ရိုင်းရိုင်းလိုက်ရေးလိုက်၊ ဒီဘလော့ဂ်မှာလည်း တခြားကောင်းကောင်း လာရေးနေသူတွေနဲ့ ကျွန်မ နာမည်ကို ယူသုံးပြီး အတုလုပ်ရေးလိုက်နဲ့ လိုက်လုပ်နေတဲ့အထဲမှာ တယောက်အပါအ၀င်ဖြစ်တယ်။ ကျွန်မဘလော့ဂ်ကို အမြဲလာဖတ်နေသူတွေလို့ ခန့်မှန်းရတဲ့ အပေါ်က ပြည်သူ့ဘက်သားနဲ့ ရဲဘော်ဘက်ခက် ရေးထားတဲ့ မှတ်ချက်ကို ပြန်ဖတ်ကြည့်ရင် သိနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ရုရှားက သူ့အဖေတွေမဟုတ်ဘူး နှောင့်ယှက်နေသူက သူကိုယ်တိုင် ဖြစ်တယ်။
ဒီပို့စ်အပါအ၀င် ဘ၀ဖြတ်သန်းမှုကို ရေးထားတဲ့ပို့စ်တွေ အားလုံးက ကျွန်မရဲ့ ဘ၀မှတ်တမ်းမျှသာ ဖြစ်တယ်။ အာဏာရှင်ကလွဲပြီး ဘယ်သူ့ကိုမှ ထိခိုက်စေလိုတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်မရှိပါဘူး။ ကိုယ့်ဘ၀ဖြတ်သန်းမှုကို ဘယ်သူမဆို လွတ်လပ်စွာ မှတ်တမ်းရေးပိုင်ခွင့် ရှိပါတယ်။ ဒါကို မဆီမဆိုင် ဆတ်ဆတ်တုန်အောင် နာပြီး ကောက်ကျစ်စွာနဲ့ အမျိုးမျိုး နှောင့်ယှက်၊ ယုတ်ရိုင်းနေကြတာကိုတော့ ကျွန်မလည်း ဘာမှ အကူအညီပေး မတတ်ပါဘူး။ကျွန်မကို စစ်သားမကောင်းကြောင်းတွေ ရေးနေတယ်လို့ နေရာတိုင်းမှာ လျှောက်ပြောနေကြပေမဲ့ ကျွန်မ စစ်သားမကောင်းကြောင်း တခါမှ မပြောဖူးဘူး စစ်ခွေးတွေကိုပဲ မကောင်းလို့ မကောင်းကြောင်း အမှန်အတိုင်း ပြောတာဖြစ်တယ်။ ကျွန်မဘလော့ဂ်နဲ့ ဘလော့ဂ်တကာမှာ မာသမာသူတွေက ကျွန်မနာမည်နဲ့ ကျွန်မ ယောက်ျားနာမည်သုံးပြီး ဘယ်လိုပဲ ကောက်ကျစ်စွာ ပေါက်ကရ လျှောက်ရေး လျှောက်လုပ်နေပေမဲ့ ဘယ်သူကောက်ကောက် ကျွန်မကတော့ အမြဲဖြောင့်နေပါတယ်။
June 1, 2011 at 11:24 PM Reply
ငယ်နိုင်.ယောက်ျား , တုတ်ကြီး, zaw, mg အားလုံးက တစ်ယောက်တည်းပါ
June 1, 2011 at 11:54 PM Reply
Anonymous People Power Movement 2012 - zaw ကိုယ်တိုင်က ရုရှားက ပညာတော်သင်တဦး ဖြစ်ပြီး သူ့နာမည်နဲ့ကျတော့ ဆဲတဲ့စကားလုံးကို ရှောင်ပြီးစော်ကားတဲ့ မှတ်ချက်တွေ လာပေးနေတဲ့ သူတယောက်ပါ။ ဒီဘလော့ဂ်နဲ့ အာဏာရှင် အားပေးဘလော့ဂ်တွေမှာ နာမည်အမျိုးမျိုး (သို့) ကျွန်မနာမည်သုံးပြီး အရေမရအဖတ်မရ (သို့) ယုတ်ယုတ်ရိုင်းရိုင်းလိုက်ရေးလိုက်၊ ဒီဘလော့ဂ်မှာလည်း တခြားကောင်းကောင်း လာရေးနေသူတွေနဲ့ ကျွန်မ နာမည်ကို ယူသုံးပြီး အတုလုပ်ရေးလိုက်နဲ့ လိုက်လုပ်နေတဲ့အထဲမှာ တယောက်အပါအ၀င်ဖြစ်တယ်။ ကျွန်မဘလော့ဂ်ကို အမြဲလာဖတ်နေသူတွေလို့ ခန့်မှန်းရတဲ့ အပေါ်က ပြည်သူ့ဘက်သားနဲ့ ရဲဘော်ဘခက် ရေးထားတဲ့ မှတ်ချက်ကို ပြန်ဖတ်ကြည့်ရင် သိနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ရုရှားက သူ့အဖေတွေမဟုတ်ဘူး နှောင့်ယှက်နေသူက သူကိုယ်တိုင် ဖြစ်တယ်
ဟုတ်ကဲ့ ... အခုလို ရှင်းပြပေးတာ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
နေပြည်တော်က သခင်တွေက ပြည်ဖျက်၊ ရုရှားက ကျွန်တွေက ဘလော့ဖျက် လုပ်နေတာတွေကို အမှန်ကိုအမှန်အတိုင်း ထုတ်ဖော်ရေးသားပြီး အရိုးခံပြည်သူတွေကို သိသင့်တာတွေ သိထားအောင် ဝေငှပေးနေတဲ့ ဘလော့ရှင်ကိုရော၊ စစ်ကျွန်တွေရဲ့ အောက်တန်းကျကျ ဆဲဆို စော်ကား နှောင့်ယှက်တာကို ကန့်ကွက်နေကြတဲ့၊ ဆန့်ကျင်နေကြတဲ့ "Anonymous" (June 1, 2011 4:12 AM) ၊ " ပြည်သူ့ ဘက်သား" ၊ "ရဲဘော်ဘခက်" အပါအဝင် အမှန်တရားဖက်က ပြည်သူ အားလုံးကိုပါ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
မငယ်နိုင် ရှင်းပြမှ အပေါ်က မှတ်ချက်တွေကို ပြန်ဖတ်မိပြီး "zaw" ဆိုတာ Nge Naing နာမည် အပါအဝင် နာမည်အမျိုးမျိုး သုံးပြီး အရေမရအဖတ်မရ ရော၊ ယုတ်ယုတ်ရိုင်းရိုင်း ပါ လိုက်ရေး နေတဲ့ ရုရှားက ပညာတော်သင်တွေ အထဲမှာ တယောက်အပါအ၀င်ဖြစ်တယ် ဆိုတာ ရှင်းသွားတယ်
တဆက်ထဲ မငယ်နိုင်ရဲ့ ပို့စ်အဟောင်းတွေ ဖတ်ရင်းနဲ့ မငယ်နိုင် နဲ့ အမှန်တရားဖက်က ပြည်သူတွေ ရေးထားတဲ့ မှတ်ချက်ဟောင်းတွေ ဖတ်မိတော့ ရုရှားက ပညာတော်သင်စစ်ဗိုလ် ဆိုတဲ့ "zaw" ဆိုတာ မင်းသားခေါင်း ဆောင်းထားတဲ့ ဘီလူး ဆိုတာ ပိုပြီး ဇာတ်ရည်လည်သွားတယ်
အမှန်တရားကို တင်ပြပေးနေတဲ့ မငယ်နိုင် အပါအဝင် ပြည်သူ့ဘလော့ဂါတွေ ကို တိုက်ခိုက်တဲ့ အဖျက်လုပ်ငန်းတွေ လုပ်နေတဲ့ ရုရှားက ပညာတော်သင်စစ်ဗိုလ်တွေရဲ့ သရုပ်မှန်ကို မကြာမကြာ အခုလို တင်ပြပေးစေချင်ပါတယ်
မသိသေးတဲ့ စာဖတ်ပရိသတ်တွေ သိထားသင့်လို့ပါ
June 2, 2011 at 12:20 AM Reply
အမှန်တရားကို တင်ပြပေးနေတဲ့ မငယ်နိုင် အပါအဝင် ပြည်သူ့ဘလော့ဂါတွေ ကို တိုက်ခိုက်တဲ့ အဖျက်လုပ်ငန်းတွေ လုပ်နေတဲ့ ပြည်သူ့ရန်သူ ရုရှားက ပညာတော်သင်စစ်ဗိုလ်တွေအကြောင်းကို မငယ်နိုင် နဲ့ အမှန်တရားဖက်က ပြည်သူတွေ ရေးထားတဲ့ မှတ်ချက်ဟောင်းတွေကို ကော်ပီ လုပ်ပြီး အောက်မှာ တင်ပေးလိုက်ပါတယ်
မငယ်နိုင်ဘလော့ကို လာနေကျ မဟုတ်သူတွေ အနေနဲ့ မျက်စေ့မလည်ပဲ ရှင်းရှင်းလင်းလင်း သိထားနိုင်အောင်ပါ
မဖတ်ရသေးတဲ့ စာဖတ်ပရိသတ်တွေ ဖတ်သင့်တဲ့ "Blogger Support Group" ရေးခဲ့တဲ့ comment says:
June 2, 2011 at 12:21 AM Reply
မဖတ်ရသေးတဲ့ စာဖတ်ပရိသတ်တွေ ဖတ်သင့်တဲ့ "Blogger Support Group" ရေးခဲ့တဲ့ comment
Blogger Support Group said:
သေရေးရှင်ရေး နာရေးကိစ္စ ရေးထားတဲ့ မငယ်နိုင်ရဲ့ ပို့စ်မှာ မငယ်နိုင်ကို တိုက်ခိုက်တဲ့ comment လာထည့်တာ ကျင့်ဝတ်သိက္ခာအရ ဘယ်လောက်ရိုင်းတယ်ဆိုတာ ကိုယ်ဖါသာကိုယ် သိသိ ကြီးနဲ့ လာထည့်သွားတဲ့ zaw (May 10, 2011 10:19 PM) ဆိုတာ ရုရှက ပညာတော်သင် စစ်ဗိုလ် တုတ်ကြီး
zaw (May 10, 2011 10:19 PM) = တုတ်ကြီး
မဖတ်ရသေးတဲ့ စာဖတ်ပရိသတ်တွေ ဖတ်သင့်တဲ့ "Observer" ရေးခဲ့တဲ့ comment says:
June 2, 2011 at 12:24 AM Reply
မဖတ်ရသေးတဲ့ စာဖတ်ပရိသတ်တွေ ဖတ်သင့်တဲ့ "Observer" ရေးခဲ့တဲ့ comment
မဖတ်ရသေးတဲ့ စာဖတ်ပရိသတ်တွေ ဖတ်သင့်တဲ့ "A" ရေးခဲ့တဲ့ comment says:
June 2, 2011 at 12:26 AM Reply
မဖတ်ရသေးတဲ့ စာဖတ်ပရိသတ်တွေ ဖတ်သင့်တဲ့ "A" ရေးခဲ့တဲ့ comment
မဖတ်ရသေးတဲ့ စာဖတ်ပရိသတ်တွေ ဖတ်သင့်တဲ့ "Nge Naing" ရေးခဲ့တဲ့ comment says:
June 2, 2011 at 12:28 AM Reply
မဖတ်ရသေးတဲ့ စာဖတ်ပရိသတ်တွေ ဖတ်သင့်တဲ့ "Nge Naing" ရေးခဲ့တဲ့ comment
(( မင်းတို့ ရုရှားက ပညာတော်သင်ဆိုတဲ့ ပညာတတ်တွေက ဒီလောက်တောင် ရိုင်းရလား
ခက်တာက "တုတ်ကြီး" တို့၊ "sv ယောက်ျား" တို့၊ "Zaw" တို့ ဆိုတဲ့ ကလေကချေ စစ်သားတွေ မကောင်းပေမဲ့ ကျွန်မ ဘလော့ဂ်မှာ ရုရှားက ကောင်းတဲ့ စစ်သားတွေ အများကြီး စာလာဖတ်နေတာ ရှိတော့ ပိတ်လိုက်ရင် တယောက်နှစ်ယောက်ကြောင့် အများ ထိခိုက်မှာ မဖြစ်စေချင်လို့ပါ။ ))
အကြောင်းပြန်သင့်တဲ့ မှတ်ချက်တွေကိုတော့ လိုအပ်ရင် လိုအပ်သလို ဘလော့ဂ်ကို ကျွန်မ အကြောင်းပြန်ပေးပါတယ်။ ကျွန်မဘလော့ဂ်ကို လူမလာအောင် ကျွန်မကို အမျိုးမျိုး နှောက်ယှက်ပေးနေပေမဲ့ လူက သူတို့နှောင့်ယှက်မှ အရင်ကထက် ပိုလာတာတော့ အမှန်ပဲ။
အမြဲလာဖတ်နေသူတွေ သိပြီးသား ဖြစ်ပေမဲ့ အခုမှ လာဖတ်ဖူးတဲ့သူတွေကို နောက်တခု အသိပေးချင်တာက သူများဘလော့ဂ်တွေမှာ ကျွန်မ မှတ်ချက်ရေးရင် ကျွန်မရဲ့ အီးမေးလ်နဲ့သာ log in လုပ်ပြီး ရေးတဲ့အတွက် ကျွန်မ ဘလော့ဂါအမှတ်အသားနဲ့ ကျွန်မရဲ့ Profile ပုံပေါ်နေမှာ ဖြစ်တယ်။ Profile ပုံနဲ့ ဘလော့ဂါအမှတ်အသား မပါတဲ့ Comment တွေ အားလုံး ကျွန်မမဟုတ်ဘူးလို့ Nge Naing အတုတွေဆီက ရောက်လာသူ အားလုံးကို အသိပေးထားပါတယ်။ အထူးသဖြင့် Myanmar Express မှာ ရေးထားတဲ့ Nge Naing တွေ အားလုံး တခုမှ ကျွန်မမဟုတ်ဘူး။
June 2, 2011 at 3:47 AM Reply
whoever said whatever, Nge Naing will be going forward with never surrender courage and strong belief.
June 2, 2011 at 5:17 AM Reply
လောလောဆယ်တော့ ဒီပို့စ်နဲ့ပတ်သတ်ပြီး ကျုပ် mg တစ်ယောက်လည်း တစ်ခါပဲ လာရေးရသေးတာပါ။အခုရောဆို ၂ခါပေါ့။ဒီဘလော့ကို မလာတာတောင် အတော်ကြာပေါ့။အမည်မျိုးစုံနဲ့ လာမရေးတတ်ပါဘူး။အခုရေးနေတဲ့ Anonymous ဆိုတာကလည်း Google မှာ gmail မ၀င်ချင်တော့လို့ လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ Anonymous နဲ့ဝင်ပြီး အောက်မှာ နာမည် mg လို့ပေးပြီး ရေးလိုက်တာပါ။
ကျုပ်က ဆဲဆိုတာကို အားမပေးပါဘူး။ကိုယ်တိုင်လည်း မဆဲဆိုပါဘူး။ဘာအတွက်နဲ့ ဆဲနေမှာလဲ။ဆဲလိုက်တာနဲ့ ကိုယ်တိုင်အရင်ခံစားရမှာက ဒေါသ မောဟ။အဆဲခံရတဲ့သူက နောက်မှ ဘာမှမဖြစ်ဘူး။ဘာမှအကျိုးမရှိဘူး။
mg ဆိုတဲ့ နာမည်တူတွေလည်း ရှိတာပါပဲ။ကျုပ်ပြောခဲ့တာတွေက ပေါက်ကရတွေတော့ မဟုတ်ဘူးဗျ။ကျုပ်အမြင်လေးတွေကို ချပြတာပါ။ထားပါတော့ဗျာ ဒါနဲ့ ခင်ဗျားဘလော့လည်း ကွန်းမန့်တွေက ရှုပ်ပွနေပြီ ဘာတွေမှန်းမသိတော့ဘူး။
လွဏ်းဆွေဘလော့မှာ ဆွေးနွေးဖူးတဲ့ ကျုပ် mg က ၇ လပိုင်းမှာ မြန်မာပြည်ပြန်တော့မှာဖြစ်တဲ့အတွက် အဲဒီနောက်ပိုင်းမှာ အမည်တူတွေ ဘာညာတွေနဲ့ လာပြီး ဆဲဆိုရိုင်းစိုင်းတာတွေရှိရင် mg မဟုတ်ဘူးဆိုတာ နားလည်ပေးပါ။ဒါပါပဲ။
June 2, 2011 at 10:35 AM Reply
ဒီဘလော့ဂ်ကို မရောက်တာ ကြာရော့ပေါ့ ဆိုတဲ့ Russia က mg အတွက် ငယ်နိုင်ပို့စ်တိုင်းနီးပါးကို အလွှတ်မပေးပဲ တန်ဖိုးရှိတဲ့မှတ်ချက်တွေကို ၀င်ပေးနေတဲ့ အောက်က မှတ်ချက်တွေက ဘယ်လောက် လိမ်ညာကြောင်း သက်သေထူနေလိမ့်မယ်။ လိမ်ညာတာတင်မက ဘယ်လောက်ကောက်ကျစ်လဲဆိုရင် Link ကို US က mg ရဲ့ link လို ဖန်တီးထားပြီး US က mg နဲ့ Nge Naing ကို အထင်လွှဲအောင် လုပ်ခဲ့တယ်။ US က mg နဲ့ ကျွန်မနဲ့ အီးမေးလ် အဆက်အသွယ် ရှိပါတယ်။ သူက မအားလို့ ဘလော့ဂ်ကို မရောက်ဖြစ်တာ အတော်ကြာပြီး အခုမှ ပြန်ရောက်လာတာ။ Russia က mg ရဲ့ ဒီဘလော့၈်ကို မရောက်တာ ကြာပေါ့ ဆိုတဲ့စကားနဲ့ ညီမညီ အောက်က မှတ်ချက်တချို့ (တ၀က်တပြက်လည်းပါတယ်) ကို ကြည့်ပါ။ Russia က ပညာတော်သင်တဦး ဘယ်လောက်အချိန်ကို အကျိုးရှိစွာ အသုံးချပြီး လူသားကောင်းကျိုးအတွက် တန်ဖိုးရှိတဲ့ မှတ်ချက်တွေကို ရေးထားတယ်ဆိုတာ သိစေချင်လို့ အချိန် တနာရီခန့်ကုန်ခံပြီး အရင်ပို့စ်တွေထဲက ပြန်ကူးကာ နှစ်ခုခွဲပြီး တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။
-http://nge-naing.blogspot.com/2011/03/blog-post_21.html စစ်ခွေးတွေ စစ်ခွေးတွေ စစ်ခွေးတွေမှာ
mg said...ပြောစမ်း.. ပေါက်ကရ (March 21, 2011 1:40 AM)
- http://nge-naing.blogspot.com/2011/03/blog-post_22.html ဘောင်မပါတဲ့ မျက်မှန်တလက်မှာ
mg said...ပြောစမ်း....ပေါက်ကရ( March 23, 2011 4:27 AM)
- http://nge-naing.blogspot.com/2011/04/blog-post.html (စစ်ခွေးတွေ)၃ အပိုင်း (၂) မှာ စုစုပေါင်း ၂ ခုရှိတယ်။
mg said...အောင်ခြင်းရှစ်ပါး သီချင်းက ပိုကောင်းပါတယ်ဗျာ။ ဒီလိုပိုစ့်တွေ မရေးခင်၊ မတင်ခင်မှာ စီဘောက်စ်ရဲ့အပေါ်အောက်က ဗုဒ္ဓသီချင်းလေးတွေ အရင်နားထောင်ပြီး ဒေါသမောဟ တွေဖြေဖျောက်သင့်ပါတယ်။ အကုသိုလ်တော်တော်များနေတယ်ဆိုတာကို ကိုယ့်ကိုယ်ကို သတိပြုပြီး အချိန်မလင့်ခင် ဘာသာရေးအထူးလိုက်စားလိုက်ပါ (April 3, 2011 2:39 AM)
- http://nge-naing.blogspot.com/2011/04/blog-post_05.html ပန်းပန်လျှက်ပဲမှာ
mg said...ဒီအသက်ဒီအရွယ် နဲ့ Hit တက်တာ ကို ကျေနပ် ပြီး ပိုစ့်တင်တဲ့လူကရှိသေးတယ်နော် ဒုက္ခ ဒုက္ခ (April 5, 2011 6:08 PM)
- http://nge-naing.blogspot.com/2011/04/blog-post_20.html ဒါလား မြန်မာ့ရိုးရာသင်္ကြန်ဆိုတာမှာ စုစုပေါင်း ၃ ခုရှိတယ်။
mg said...ယနေ့ခေတ်ကာလ တချို့မြန်မာအမျိုးသမီးတွေရဲ့ အခြေအနေက တော်တော်လေးကို ပုံပျက်ပန်းပျက်ဖြစ်နေပါတယ်.. မြန်မာနိုင်ငံထဲက မြန်မာမိန်းခလေးတွေတောင် မြန်မာမှုဒီလောက်ကင်းမဲ့နေကြရင် ပြည်ပရောက်မိန်းခလေးတွေဆိုရင်တော့ စဉ်းစားသာကြည့်တော့ (April 20, 2011 10:51PM)
- http://nge-naing.blogspot.com/2011/04/blog-post_26.html ဖတ်စေချင်သည်မှာ စုစုပေါင်း ၂ ခုရှိတယ်
mg said...အရင်ဆုံး မရင့်ကျက်သေးတဲ့ စိတ်ကို တည်ငြိမ်ရင့်ကျက်အောင် ကြိုးစားပါ...ဖတ်စေချင်ပါသည်
- http://nge-naing.blogspot.com/2011/05/blog-post.html မောင်မောင်ယဉ်ကျေးသို့တောင်းပန်ခြင်းမှာ
စရိုက်တူတဲ.လူခြင်းပေါင်းမိကြတာ၊ အဆင်ပြေကြတာမဆန်းပါဘူး........ ((May 1, 2011 5:20 AM)
- http://nge-naing.blogspot.com/2011/05/13411.html ကံမကောင်းသော နေ့တနေ့မှာ
mg said...လုပ်ခဲ့သမျှ အကုသိုလ်တွေ မကုန်သ၍ ဒုက္ခတွေ ပြဿနာတွေ ကံမကောင်းတဲ့ နေ့တွေနဲ့ ကြုံအုံးမှာပဲ..(May 6, 2011 8:31 PM)
- http://nge-naing.blogspot.com/2010/05/blog-post_09.html ပျော်၍မရသော အမေနေ့အတွေးမှာ ၂ ခုရှိတယ်။ --mg said...အမေကောင်းတစ်ယောက်အဖြစ် ဂုဏ်ယူပါတယ် မငယ်နိုင်ရေ.. မငယ်နိုင်ရဲ့ အမေတုန်းက မငယ်နိုင်ကိုတောထဲမှာပဲထားနိုင်ခဲ့ပေမယ့်----(
May 7, 2011 1:41 PM)
- http://nge-naing.blogspot.com/2011/05/7511-happy-birthday-procedure-scan.html ဆရာ့မွေးနေ့ ဆုတောင်းမှာ -mg said...ကိုယ်သိတဲ.တစ်ယောက်သေရင်သေတဲ.အကြောင်း၊ ကိုယ်သိတဲ.တစ်ယောက်မွေးနေ့ကျရင် မွေးနေ့အကြောင်း၊ မောင်မောင်ယဉ်ကျေးလို ပုဂ္ဂိုလ်ထူးနဲ.တွေ.ဆုံးခြင်းအကြောင်း.... ဟူး.. ဒီထက် အရည်ရ အဖက်ရတဲ. မှတ်သားစရာပို.စ်တွေ မရေးတတ်တော.ဘူးလား..------(May 8, 2011 1:03 AM)
- http://nge-naing.blogspot.com/2011/05/blog-post_16.html Blue Mountain သွား တောလား ပို့စ်မှာ - mg said...ကွန်းမန်.တွေ ပြန်ဖြတ်နေပြီလားဘလော.ဂါကြီးရေ ကိုယ်မဟုတ်ရင်နာစရာမလိုဘူးပေါ. ဒီစကားက မငယ်နိုင်ကိုယ်တိုင်ပြောခဲ.တာပဲလေ.. ၂ ကြိမ်မြောက်ပြန်တင်လိုက်ပါတယ် .....(May 16, 2011 3:45 AM)
- http://nge-naing.blogspot.com/2011/05/blog-post_3464.html ဗုဒ္ဓနေ့ဆုတောင်းပို့စ်မှာ - mg said...ဒီပိုစ်.က နံပါတ် ၂ အချက်နဲ. ကိုက်ညီပါတယ် ၂။ ဘယ်ကိုသွားလဲ.. နွေ၊မိုး၊ဆောင်းနှင့်ကျွှန်တော်၊ကျွှန်မတို့အကြောင်း ကိုယ်ရေးချင်တာရေးတင်ပါ...။ တခြားအချက်တွေကတော့ သင်၏ဘလော့ဂ်နာမည်ကြီးရန် အတွက်.... (May 17, 2011 3:51 AM)
- http://nge-naing.blogspot.com/2011/05/blog-post_18.html ဆရာဝင်းမြင့်သိန်း ဈာပနနဲ့ ရက်လည်ဖိတ်ကြားလွှာပို့စ်မှာ mg said...အွန်လိုင်းကလူတွေက လာဖိတ်တော.ဘာလုပ်ရမှာတုန်း
ဘလေ.့ပေါ်တင်တဲ. ရက်လည်ဖိတ်စာ ဒီတစ်ခါပဲတွေ.ဖူးတယ် ပိုစ်.တင်စရာမရှိရင်လည်း မတင်ပဲနေပါအုံးဗျာ.. နာမည်ကြီးဖို.က ပိုစ်.တွေဆက်တိုင်တင်ဖို.မလိုပါဘူး.. ပညာရတဲ.ပိုစ်.တွတင်ဖို.က အဓိကပါ (May 19, 2011 5:20 AM)
- http://nge-naing.blogspot.com/2011/05/blog-post_19.html မိခင်တယောက်၏ ရင်ဖွင့်စာ ပို့စ်မှာ mg said...မမှားသောရှေ.နေ မသေသောဆေးသမား ဆိုတဲ.စကားကို ကြားဖူးမယ်ထင်ပါတယ်
မြည်သို.ဆိုစေ ပြည်တွင်းမှာနေပြီး ကိုယ်.နိုင်ငံသားပေါင်းများစွာကို ကုနေရင်း မတော်တဆသေရတဲ.ဆေးသမားတွေက ပြည်ပမှာနေပြီးကိုယ်.နိုင်ငံသားမဟုတ်တဲ. သူတွေကို ဆးရုံတွေမှာ ကျွန်တပိုင်းလို ပြုစုစောင်.ရှောက်ပေးနေရသူတွေထက်တော. အများကြီးသာတာသေချာပါတယ် (May 20, 2011 5:09 AM)
- http://nge-naing.blogspot.com/2011/05/blog-post_24.html ဆရာဝင်းမြင့်သိန်း ဈာပနနဲ့ ရက်လည်ဆွမ်းကျွေးအခမ်းအနားပို့စ်မှာ mg said...သေပေးလို. (မငယ်နိုင်ကိုယ်စား) ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ဆရာဝင်းမြင်.သိန်း ခင်ဗျာ... ပိုစ်. ၅ ခုတော.ရလိုက်ပါတယ် (May 24, 2011 9:09 AM)
June 2, 2011 at 11:50 AM Reply
ငမောင် ငကြောင်က (( ဆရာဝင်းမြင့်သိန်း ဈာပနနဲ့ ရက်လည်ဆွမ်းကျွေးအခမ်းအနားပို့စ် )) ( http://nge-naing.blogspot.com/2011/05/blog-post_24.html ) မှာတောင် မရှောင်နိုင်ပဲ မငယ်နိုင်ကို အရင်အပတ်ကတင် ပုတ်ခတ်စော်ကား သွားသေးတာကို မငယ်နိုင်ရော ဒီဘလော့မှာ စာလာဖတ်နေကျ အလည်လာသူတွေအများစုကပါ သတိထားမိပါတယ်..
ငမောင် ငကြောင်က --
((.သေပေးလို. (မငယ်နိုင်ကိုယ်စား) ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ဆရာဝင်းမြင်.သိန်း ခင်ဗျာ... ပိုစ်. ၅ ခုတော.ရလိုက်ပါတယ် )) (May 24, 2011 9:09 AM)
ဆိုပြီး လူမဆန်စွာ ရေးသွားတာလေ..
ငမောင် ငကြောင်က အဲဒီလို နာရေး ပို့စ်ပါ အလွတ်မပေးပဲ မငယ်နိုင်ကို ဝင်စော်ကားတာပါ.. ပြီးတော့ မငယ်နိုင်က မနေ့က ပို့စ်အသစ် (( မြန်မာပြည်မှ အနုပညာ ပါရမီရှင်လေးတဦး )) ( http://nge-naing.blogspot.com/2011/06/facebook-youtube-source.html ) တင်တော့လဲ ငမောင် ငကြောင်က ချက်ချင်း သိပြီး ရှေ့ဆုံးက ကွန်မန့် ဝင်ပေးသွားတယ် ဆိုတော့ ငမောင် ငကြောင်က မငယ်နိုင်ဘလော့ကို နေ့တိုင်း ရောက်နေတာ ရှင်းနေတာပဲ.. တနေ့ကို တခါ မက ဝင်နေလို့သာ မငယ်နိုင် ပို့စ်အသစ် တင်တာကို ချက်ချင်း သိပြီး ဒီပို့စ်မှာ ပထမဆုံး ကွန်မန့်ပေးသူ ဖြစ်တာပေါ့..
ငမောင် ငကြောင်က ပထမဆုံး ကွန်မန့်ပေးသူ ဖြစ်နေတာ ဒီပို့စ် တခုထဲ မဟုတ်ပါဘူး.. ခဏခဏပါ..
ဒီကြားထဲက ငမောင် ငကြောင်က (( ဒီဘလော့ကို မလာတာတောင် အတော်ကြာပေါ့ )) ဆိုပြီး ဗြောင်လိမ်ဗြောင်စား လာလုပ်နေတာ ရယ်လိုက်ရတာ အူတက်နေပြီ.. ငမောင် ငကြောင်က အမြဲ လိမ်နေကျ အတိုင်း ရမလားလို့ လိမ်ကြည့်တာ ဗူးပေါ်သလို အလိမ်ပေါ်သွားတော့ အရှက် လုံးလုံး ကွဲတော့တာပဲ..
ဒီလောက် ရှင်းနေတာကိုတောင် ကပ်ပြီး ရအောင် လိမ်ရဲတဲ့ ငမောင် ငကြောင် ပြောတဲ့ စကားတွေရဲ့ တန်ဖိုးကတော့ သုည ပါပဲ..
June 2, 2011 at 6:35 PM Reply
June 2, 2011 at 11:15 PM Reply
အဲဒီ ရုရှက ကောင်တွေ အကြောင်းကတော့ နေရာတိုင်းမှာ ကြားနေရတယ်၊ တစ်ခုမှ ကောင်းတာ မပါဘူး၊ ပညာတတ် ဆိုတာ တစ်ကယ့် ဘုရားစူး!!! ဘယ်လို ယုံရမှန်းကို မသိဘူး.. မင်းတို့ စစ်တပ်ထဲမှာ ပညာတော်သင်လွှတ်ဖို့ မင်းတို့ထက် တော်တဲ့လူတွေ မရှိတော့ ဘုူးလား? ကြည့်ရတာ မင်းတို့တွေက အတော်ဆုံးတွေ ထင်တယ်၊ ဒါဆိုယင်တော့ မြန်မာ့ တပ်မတော်က တော်တော်သနားစရာ ကောင်းနေပြီ။
June 3, 2011 at 12:40 AM Reply
"ကျုပ်ပြောခဲ့တာတွေက ပေါက်ကရတွေတော့ မဟုတ်ဘူးဗျ။ကျုပ်အမြင်လေးတွေကို ချပြတာပါ။"
ဆိုပြီး ရုရှားရောက် စစ်ဗိုလ် mg က ပြောသွားပါလား။
အရူး ဆိုတာ ကိုယ်တိုင်ကတော့ "ကျနော် ရူးနေပါတယ်" လို့ ဘယ်ပြောပါမလဲ။
အရူးက သူ ရူးနေတယ် ဆိုတာမှ မသိတာ။
mg ကလည်း ပေါနေတာကို ပေါမှန်း မသိရှာဘူး။
mgက ပေါက်ကရတွေ ပြော နေတာကို ပေါက်ကရတွေမှန်း သူ့ကိုသူ မသိရှာဘူး။
ဒီတော့ "ကျုပ်ပြောခဲ့တာတွေက ပေါက်ကရတွေတော့ မဟုတ်ဘူးဗျ" လို့ ပြောရှာတာပေါ့။
mg က ပေါတောတော နဲ့ ပေါက်ကရတွေ ရေးနေတာကို အသိဥာဏ်ရှိတဲ့ စာဖတ်သူတွေက သိပြီးသားဘဲ။
စာဖတ်သူတွေက ဝင်မပြောကြတာက mg လို ငပေါ နဲ့ ပြိုင်ပြီး မပေါချင်ကြလို့။
ူ"လူပြောမသန်၊ လူသန်မပြော" ဆိုတာ အဲဒါဘဲပေါ့။
မငယ်နိုင်က နိုင်ငံရေးအသိ၊ တိုင်းချစ်ပြည်ချစ်စိတ်၊ အထွေထွေဗဟုသုတ တိုးပွားစေတဲ့ စာတွေကို ရေးနေသူပါ။
mg ကိုယ်တိုင်က မငယ်နိုင်ရဲ့ ခြေဖျားကို မှီသူ မဟုတ်ပါ။
ဒါပေမယ့် mg က မငယ်နိုင်ရဲ့ ဆောင်းပါးက "မကောင်းပါဘူး၊ ညံ့ပါတယ်" လို့ တချိန်လုံး ပြောနေတာပါ။
mg ဆိုတဲ့ အပြောကြီးသူ ("လူပြော") ရဲ့ ဦးနှောက်က မသန်စွမ်းရှာဘူး။
"လူပြောမသန်" ဆိုတာ အဲဒါဘဲပေါ့။
"လူသန်မပြော" ဆိုတာက ဒီလိုပါ။
mg ဆိုတဲ့ ငပေါ က ပေါတောတော နဲ့ ပြောနေတာတွေကို စာဖတ်သူတွေက မြင်နေရပါတယ်။
အဲဒီ စာဖတ်သူတွေထဲမှာ mg ထက် အဆပေါင်းများစွာ ပိုသိ၊ ပိုတတ်တဲ့ လူတွေ ဒုနဲ့ဒေးနဲ့ပါ။
အမှန်အတိုင်း မြင်နေတဲ့ ဦးနှောက်သန်စွမ်းတဲ့ စာဖတ်သူ ("လူသန်") တွေက mg ကို ငပေါ မို့လို့ ဝင်မပြောတာ။
"လူသန်" တွေက ဘက်မတူလို့ ဝင်ကို မပြောတော့တာ။
အေး ... ဒါပေမယ့် အရူး၊ အရူးနဲ့ အိမ်ဦး ချေးယိုဖို့တော့ မကြိုးစားနဲ့။
June 3, 2011 at 1:10 AM Reply
အဲဒီ စစ်ခွေးတွေက တော်တော်အာရုံ နောက်တာဘဲ၊ မင်းတို့ အလုပ် အကိုင် မရှိဘူးလား? တော်တော် အားနေကြလား? လူတိုင်းက အဖက်မလုပ်ချင်တာလဲ မပြောနဲ့၊ ပြောလည်း အမှတ်မရှိ၊ အရှက် ကလည်း မရှိ၊ တကယ့် တောကြို အုံကြား စရိုက်တွေ.. (ကောင်းသော စစ်သားအချို့ နှင့် မငယ်နိုင်>> ရိုင်းသွားယင် sorry ပါ..)
June 3, 2011 at 1:29 AM Reply
June 3, 2011 at 2:21 AM Reply
အင်း မငယ်နိုင်တစ်ယောက် ဘာတွေပြောနေတာလည်းဆိုတာ ကျုပ်လည်း နားမလည်တော့ဘူး။mg ဆိုတာ ဘယ်နှစ်ယောက်များ ရှိနေသလည်းမသိပါဘူး။ထားပါတော့လေ ကျုပ်က ခင်ဗျားဘလော့မှာ လာမရေးတာ အတော်ကြာပြီဆိုတာတော့ သေချာတာတစ်ခုပါပဲ။မှတ်မှတ်ရရ ဘာသာရေးနဲ့ဆိုင်တဲ့ ပို့စ်တစ်ခုမှာလားမသိဘူး ၀င်ပြီးပြောဖူးတယ်။ခင်ဗျားတောင်မှ ကျုပ်ကိုထောက်ခံတဲ့ ကွန်းမန့်လေးတောင် ရေးလိုက်ပါသေးတယ်။ထားပါတော့လေ ဒါက နည်းနည်းကြာသွားပြီထင်တယ်။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်လေ ယုံသည်ရှိ မယုံသည်ရှိ ဘယ်သူ့မှအပြစ်မတင်ပါဘူးဗျာ။ကျုပ်တို့က နိုင်ငံတော်ကို ဦးစီးနေတဲ့ အာဏာပိုင်တွေမဟုတ်သလို အာဏာရဖို့အတွက်လုပ်နေတဲ့ နိုင်ငံရေးအဖွဲ့စည်းကသူတွေလည်းမဟုတ်ပါဘူး။
အမြင်မတူတာလေးတွေကို တွေ့တဲ့အခါ ချပြတာပဲရှိပါတယ်။ခင်ဗျား ချပြထားတဲ့လင့်မှာ ရေးထားတာတွေက ကျုပ်ပြောခဲ့တဲ့စကားလုံးတွေမဟုတ်လှပါဘူးဗျာ။ကျုပ်ဆိုတဲ့ မောင်က သူတစ်ပါးရဲ့ကိုယ်ရေးကိစ္စတွေကို စိတ်ဝင်စားပြီးအတင်းပြောတတ်တဲ့သူမဟုတ်ဘူးဗျ။
ကျန်တဲ့မဆိုင်တာတွေကို ပြောလေ့မရှိပါဘူး။ထားပါတော့ဗျာ ကျုပ်က ပျင်းလို့ ခင်ဗျားဘလော့ကို လာကြည့်ရင်းနဲ့ ကွန်းမန့်ရေးသွားမိတာပါ။ကျုပ်မရှိတဲ့အချိန်မှာ ခင်ဗျားဘလော့မှာ ဘာတွေဖြစ်နေလည်းဆိုတာ ကျုပ်မသိရိုးအမှန်ဆိုလေတော့ ခင်ဗျားက ကျုပ်ပဲ ပို့စ်တိုင်းရေးနေတယ်လို့ဆိုတော့ ဘာပြောရမှန်းတောင်မသိတော့ပါဘူး။
လေကကြီးက တစ်ခါတစ်လေ ဒီလိုပါပဲ။အမှန်တရားက အချိန်ကာလတစ်ခုမှာ အမှားတရားရဲ့အောက်မှာ ပျောက်ကွယ်နေတတ်ပါတယ်ဗျာ။
June 3, 2011 at 6:23 AM Reply
ရုရှားက ပညာတော်သင် စစ်သား တုတ်ကြီးက သူမကြိုက်တဲ့ အဖွဲ့အစည်း (ပြည်သူ့ ဘက်သားတွေ) ကို အပြစ်ပြောဖို့အတွက် တုတ်ကြီး ၊ Tote Kyi ၊ ချက်ကြီး ၊ စားဘဲကြီး ၊ SV ယောက်ျား ၊ ငယ်နိုင်.ယောက်ျား ၊ အာပုကျိ(ခေတ္တကိုရီးယား) ၊ စောင်.ကြည်.နေသူတစ်ဦး(ခေတ္တ- မက်ဒရစ်မြို.) ၊ Anonymous နာမည် အမျိုးမျိုး သုံးပြီး အောက်တန်းကျတဲ့ အသုံးအနှုံးတွေနဲ့ တစ်ဖက်က ရေးတယ်။
နောက်တစ်ဖက်မှာတော့ တုတ်ကြီးက တည်တည်တန့်တန့် ကွန်းမန့် ရေးလေ့ ရှိတဲ့၊ ဆဲဆိုလေ့ မရှိတဲ့ ပြည်သူ့ ဘက်သား mg နာမည်ရယ်၊ ပြည်သူ့ ဘက်သား zaw နာမည်ရယ်၊ ပြည်သူ့ ဘက်သား hanzaw နာမည်ရယ် ကို မတူတူအောင် တမင် ယူသုံးပြီး သူတော်ကောင်းပုံစံနဲ့ ရေးတယ်။
ပြောချင်တာကဗျာ၊ တုတ်ကြီး တစ်ယောက်ထဲကပဲ နှစ်ကိုယ်ခွဲ မက ကိုယ်ခွဲပေါင်း အများကြီးနဲ့ ရေးနေတာပေါ့ဗျာ။
တုတ်ကြီး နာမည်အမျိုးမျိုးထဲက တစ်ခုဖြစ်တဲ့ mg ဆိုတဲ့ နာမည်က ပိတောက်မြေ တို့ ၊ လွမ်းဆွေတို့မှာပဲ အများစု ရေးလေ့ ရှိတဲ့ ရုရှားက ပညာတော်သင် စစ်သား mg နာမည်နဲ့ တူနေတာပါဗျာ။
June 3, 2011 at 7:15 AM Reply
ငယ်နိုင်.ယောက်ျား , တုတ်ကြီး, zaw, mg (May 29, 2011 7:45 AM) အားလုံးက တစ်ယောက်တည်းပါ
mg (May 29, 2011 7:45 AM) = zaw = တုတ်ကြီး = ငယ်နိုင်.ယောက်ျား = SV ယောက်ျား = Tote Kyi = ချက်ကြီး = စားဘဲကြီး = အာပုကျိ(ခေတ္တကိုရီးယား) = စောင်.ကြည်.နေသူတစ်ဦး(ခေတ္တ- မက်ဒရစ်မြို.) = Anonymous
မငယ်နိုင်နှင့် သူငယ်ချင်းများ သိစေရန်....
ကျနော့ နာမည်နဲ့ လာရေးနေတာ ရုရှားက ကောင်တွေ အားအားရားရား ရေးနေတာဗျ။ ကနော့ အီးမေးလ် လိပ်စာ ကိုအသုံးပြုပြီးရေး ရေးသွားတယ်ဆိုလို့ ပြောခဲ့ပါအုံးဗျ။ မီးပြတိုက်(ခေါ်) SLIP က FEB 26 2011 မှာ ကျွန်တော်ကို သူရဲ့ gruop မှာ အသင်းဝင်ဖို့ send ထားတဲ့ email ၁စောင်ရှိတယ်ဗျ။ ကျနော်နဲ့ မီးပြတိုက် အရင်က email လဲ အဆက်အသွယ်မရှိ၊ အဲဒီ စစ်သားကိုလဲ ကျနော် မသိပါ။ SV ကို ထောင်ချောက်စဉ်ပြီး အမိဖမ်းပြီး နောက်ပိုင်းမှ ဒီကောင်ကို သိတာဗျ။ အရင်ကတော့ အမှတ်တမဲ့ ပါပဲ အခုမှ ကျနော် ပြန်စဉ်းစားမိတော့ ကျွန်တော့ email address ကို လူတိုင်းက အမှတ်တမဲ့ ပါပဲ၊ အရင်ကျနော် email address နဲ့ ပါ ရေးရေးနေတုန်း သိခဲ့ရင်တောင် အခုလောက်ဆို မေ့ ကုန်လောက်ပါပြီ။ အခုတော့ ။ အခုထိ ကျနော့ email address နဲ့ လာရေးနေသေးတယ်ဆိုတော့ ...အင်း စဉ်းစား စရာပေါ့ဗျာ......
June 3, 2011 at 3:10 PM Reply
Anonymous နဲ့ပဲရေးလို့ရတာဗျ ဘာလို့လဲ။ ကနော့ကို နာမည်နဲ့ ပြောင်းပေးပါအုံး။
June 4, 2011 at 4:26 AM Reply
အပေါ်က mg ။ဆင်တူလိုက်ရေးမပါနဲ့။ခင်ဗျားက ဂျီမေးလ်နဲ့ရေးလို့ ကျုပ်က Anonymous နဲ့ရေးပြီးမှ စာအောက်ကနေ mg လို့တပ်ပြီးရေးတယ်။အခု ခင်ဗျားက အောက်ဆုံး ကွန်းမန့်နှစ်ခုလုံးမှာ ကျုပ်နာမည်ရေးသလို လိုက်ရေးနေတယ်။ဟားဟား သ်ိပ်ရယ်စရာကောင်းတယ်။
June 4, 2011 at 8:40 PM Reply
mg နာမည်နဲ့ လာရေးနေတာ အရင်ကတောင် ရုရှားကတယောက် အွန်လိုင်းပေါ်မှာ ရှိပါတယ်။ အခု mg (US) ရေးတာ မဟုတ်တဲ့ mg နာမည်နဲ့ မှတ်ချက်အားလုံးကလည်း တခြားလူ ဖြစ်မယ်မထင်ဘူး၊ သူပဲဖြစ်မှာပါ။ ဘလော့ဂါနဲ့ ဘလော့ဂ်ဖတ်သူတွေကို မျက်စိလည်အောင် ရုရှားက mg က တမင်လာဖန်တီးနေတယ်ဆိုတာ သိသာထင်ရှားပါတယ်။ ဒါကြောင့် သူများ gmail link နဲ့ လာထည့်တဲ့ ရုရှားက mg ရဲ့ မှတ်ချက်တွေကို နောက်ထပ်ဖေါ်ပြပေးတော့မှာ မဟုတ်သလို အဖက်လုပ်ပြီး ပြန်လည်းဆွေးနွေးနေမှာ မဟုတ်ဘူး။
June 4, 2011 at 9:07 PM Reply
မနာလိုလို့ တိုက်ခိုက်တာ မဟုတ်ပါ ဒီမိုဆိုပြီး ရမ်းနေရင် ဒီမိုသမားတွေတေါင် လိုင်းပြောင်းသွားမယ် ဘာလို့လဲဆိုတော့ ရေးသူတွေဟာ သမိုင်းကိုမသိသေချာမရေးပဲ နအဖကို တိုက်ခိုက်ချင်တာတခုနဲ့ေ၇းနေကြလို့ပါ ဖြတ်လေးဖြတ်ဆိုတာ အရင်ကဗကပနဲ့ မြစ်ဝကျွန်းပေါ်မှာ သောင်းကျန်းခဲ့တဲ့သူတွေကြို သောင်းကျန်းမှုဒဏ ခံနေရတဲ့ ပြည်သူတွေနဲ့ ပေါင်းတိုက်ပေးခဲ့တာပါ ပြည်သူတွေသောင်းကျန်းမှုဒဏ် ဘယ်လိုခံခဲ့၇လည်း စာဖတ်ကြပါလို့ တိုက်တွန်းပါတယ် နအဖတိုက်တာနဲ့ မတူပါဘူး စာေ၇းသူဟာနာမည်ာကီးအောင် လိုက်လုပ်နေပုံ၇ပါတယ် စဉ်းစားတင်ပေးပါ ကျနော်တို့လညိး ဒီမိုသမားတွေပါ သောက်၇မ်းတွေတော့လက်မခံဘူးဗျာ ဒါပါပဲကျေးဇူးပါ သတိပြုဖို့လေးပါ
June 4, 2011 at 9:45 PM Reply
အပေါ်က မှတ်ချက်က ဒီပို့စ်မှာ ကျွန်မ ရေးထားတဲ့ အကြောင်းအရာနဲ့ မှတ်ချက်ပေးထားတာ လွဲနေလို့ ဒီမှတ်ချက်ကို ရေးတဲ့ Anonymous က ပို့စ်ကို သေသေချာချာ မဖတ်ရသေးဘူးဆိုတာ သိသာထင်ရှားနေပါတယ်။ ကျွန်မ သမိုင်းရေးဆရာ မဟုတ်ဘူး ဒီပို့စ်က သမိုင်းကို ရေးထားတာ မဟုတ် အတွေ့အကြုံကို အမှန်အတိုင်း ရေးထားတာသာ ဖြစ်တယ်။ ဘာလဲဆိုတာ သဲသဲကွဲကွဲ သိအောင် ပထမဦးစွာ ပို့စ်ကို သေသေချာချာ အနည်းဆုံး တခေါက်လောက် ပြန်ဖတ်ဖို့ မေတ္တာရပ်ခံပါတယ်။ နားမရှင်းတာ ရှိရင် ပြန်မေးနိုင်ပါတယ်။ ဒါဟာ ဘ၀အတွေ့အကြုံ ဘ၀ဖြတ်သန်းမှုသက်သက်သာ ဖြစ်တယ်။ ပို့စ်ကို အသေအချာ ဖတ်ပြီးရင် စာဖတ်သူထင်သလို နအဖလက်ထက်က အကြောင်းအရာ မဟုတ်ဘူး ဆိုတာလည်း သိသွားလိမ့်မယ်။
Anonymous ကို သိစေလိုတာက ကျွန်မ နာမည်ကြီးချင်ရင် ဘလော့ဂ်ရေးစရာမလိုဘူး အရင်ကလည်း အသက်အစိတ်ကျော် Mid-20s အရွယ်ကတည်းကတောင် International level မှာ UN အထိ အစည်းအဝေးတက်ခဲ့ဖူးပါတယ်။ အခုလည်း ဒီမှာရှိတဲ့ အဖွဲ့အစည်းတခုခုမှာ ၀င်ပါပြီး လာသမျှ အင်တာဗျူးကို လက်ခံလိုက်ရင် ချက်ချင်းနာမည်ကြီးနိုင်ပါတယ်။ ဘလော့ဂ်ရေးတာ နာမည်ကြီးချင်လို့ မဟုတ်ဘူး စာရေးတာ ၀ါသနာပါလို့ အေးအေးဆေးဆေး ကိုယ့်အိမ်ထဲမှာကိုယ်နေပြီး မိမိဝါသနာပါတာလေးတွေကို ရေးရင်း မိမိဘ၀ဖြတ်သန်းမှုလေးတွေကို မှတ်တမ်းလေး အဖြစ် လုပ်ထားတဲ့သဘောသာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလို အေးအေးဆေးဆေး ရေးနေတဲ့ ဘလော့ဂ်နဲ့ ပတ်သက်ပြီးတောင် ဒီဘလော့ဂ်အတွက်ရော တခြား ကျွန်မ Admins အဖြစ် ပါဝင်တဲ့ Public Health in Myanmar (
( http://health.ngoinmyanmar.org/ ) နဲ့ပတ်သက်ပြီးပါ VOA က အင်တာဗျူးလုပ်ဖို့ ကမ်းလှမ်းခဲ့ဖူးတာကို လက်မခံခဲ့ဘူး။ ပြီးတော့ သူများကမ်းလှမ်းတဲ့ ဘာကြော်ငြာမှ ဆိုက်ဘားမှာ တင်ဖို့ ကျွန်မလက်မခံခဲ့ဘူး။ ကျွန်မအတွက် နာမည်ကြီးချင်ရင် လွယ်လွယ်လေးပါ Anonymous. ဘ၀မှာ နာမည်ကြီးဖို့ထက် မိမိဝါသနာပါတာလေးကို အေးအေးဆေးဆေးနဲ့ လုပ်နေရတဲ့ အရသာက ပိုပြီးစွဲမက်စရာ ကောင်းပြီး Privacy ရှိပါတယ်။ ဒီဘလော့ဂ်ကို နာမည်ကြီးအောင် တကယ် လုပ်ပေးနေသူတွေက ကျွန်မကို မလိုမုန်းထားတဲ့ မနာလိုသူတွေသာ ဖြစ်တယ်။ နောက်တခါ မှတ်ချက်ပေးရင် ပို့စ်မှာဘာရေးထားတယ်ဆိုတာကို သေချာဖတ်ပြီးမှ ပေးဖို့ အကြံပြုပါတယ်။ စာကိုသေသေချာချာ မဖတ်ပေမဲ့မလည်း အခုလို ပြန်ရှင်းပြခွင့်ရတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
June 5, 2011 at 8:46 AM Reply
ကို: မငယ်နိုင်... ယူအက်စ်က မောင် တွေရော ရုရှားက မောင် တွေရော မောင် တွေများလှပြီလား.. ဘာသာရေးပဲလုပ်ပါတော့ဗျာ မောင် တွေနဲ့ ရှုတ်မနေပါနဲ့
June 5, 2011 at 9:32 AM Reply
ဒီစာရေးတာ မြန်မာအချင်းချင်း ရန်ငြိုးထားစေလို၍ မဟုတ်ဘူးဆိုတာကို ကြိုတင်ပြီး ပြောပါရစေ။ တက္ကသိုလ်တွေကရေးထားတဲ့ နိုင်ငံရေး စာအုပ်တွေက လက်တွေ့မကျဘူး ဆိုတာ တကယ်ပါ။ မြတ်ဗုဒ္ဓ ဟောကြားသလိုပဲ လောဘ၊ ဒေါသ၊ မောဟ စိတ်တွေ ကြီးနေမယ်ဆိုရင် လူဆိုးတွေပဲဖြစ်နေမှာပဲ။ ဒီမိုသမားဖြစ်မှ လူကောင်းဖြစ်တယ်။ စစ်သားဖြစ်မှ လူကောင်းဖြစ်တယ်။ တိုင်းရင်းသားတွေဟာ ရိုးသားတယ်ဆိုတဲ့ စကား တွေဟာ မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့တရားနဲ့ မကိုက်ညီပါဘူး။ အဲဒါတွေဟာ PCတွေသာဖြစ်ပါတယ်။ ငါ့လူမျိုးဆိုတဲ့ အစွဲအလန်းကြီးပြီး ဗမာကို မုန်းနေတဲ့ သူတွေရဲ့ အဖြစ်ကို ပြောပြပါမယ်။ ရခိုင်တစ်ယောက်က မြန်မာနိုင်ငံဆိုတာ ဗမာတွေကိုပဲ ကိုယ်စားပြုထားတဲ့ နာမည်ဖြစ်လို့ လက်မခံဘူးပြောတဲ့။ ဒါဆိုလဲ ရခိုင်ပြည်နယ်ဆိုတဲ့ နာမည်က ရခိုင်ပြည်နယ်ထဲက လူမျိုးအားလုံးကို ကိုယ်စားမပြုဘူး။ ရခိုင်ပြည်နယ်ရဲ့ နာမည်ကို စံနမူနာအဖြစ် ပြောင်းပြစမ်းပါလို့ ပြောတဲ့အခါမှာ ထွက်ပြေးတာ တန်းနေတာပဲ။ ကရင်ကလဲ သူ့ဘလော့ ကော်မန့်မှာ ဗမာဘုရင်တွေ ရခိုင်ကို သတ်တဲ့အကြောင်း ရှာဖွေသုတေသနပြုဖို့ ဆရာကြီးအထာနဲ့ အကြံပြုထားပါတယ်။ ကျုပ်ကလဲ သူ့စကားအတိုင်းပဲ KNU က ဗမာတွေကို သတ်တာတွေနဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာကရင်တွေကို နှိမ်ချခဲ့ပုံတွေကို သမိုင်းသိအောင် ရေးပြဖို့ပြောတော့ လူမျိုးအချင်းချင်း ရန်တိုက်ပေးတယ်ဆိုပြီး စွတ်စွဲတယ်ဗျာ။ မိမိလူမျိုးကို အစွန်းရောက်စွဲလန်းပြီး ဗမာကို မုန်းနေတဲ့ သူတွေဟာ မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ တရားတော်နဲ့ အညီ ရိုးသားမှုမရှိဘူးဆိုတာ မြင်တွေ့နိုင်ပါတယ်။ သူနဲ့ ဆီပုံးမှာ ဆွေးနွေးထားတာကို ဖတ်ကြည့်ပါ။ (အောက်မှ အထက်သို့ ဖတ်ပါရန်။)
ဘလော့ပိုင်ရှင်ကြီးသို့ : ဗမာတွေကို မုန်းအောင် ပြောတုံးက အဲလိုမပြောပါပဲ။ ကရင်တွေလုပ်ရပ်ပြောတဲ့အခါမှ လူမျိုးရေးအချင်းချင်း အဆင်မပြေစေချင်လို့ဆိုပဲ။ သဘောထားကြီးတယ်ပေါ့?
2011-06-04 10:36 PM
မန်းကိုကို : အများအကျိုးမို့ စိတ်တော့မကောင်းပါဘူး ၊ ယာယီ နာကျင်သွားမယ်ဆိုတာ နားလည်ပါတယ် ။ ဒါပေမယ့် အခြားသူတွေအတွက်လည်း ထည့်တွက်ရပါတယ် ။ ကံကောင်းပါစေ ။
2011-06-04 10:35 PM
မန်းကိုကို : မီးမွှေးချင်ရင် သစ်သားကို ထပ်ခါထပ်ခါ ပွတ်တိုက်ပေးရပါတယ် ။ လူမျိုးရေး ဘာသာရေး ပြဿနာတွေမှာလည်း ထပ်ခါထပ်ခါ အကျိုးမရှိတဲ့ စကားတွေက လောင်ကျွမ်းစေတတ်ပါတယ် ။
2011-06-04 10:33 PM
ဘလော့ပိုင်ရှင်ကြီးသို့ : စာတွေကို ဖျက်ပစ်တယ်ပေါ့။
2011-06-04 10:22 PM
ရိုးသားတဲ့ တိုင်းရင်းသားဖြစ်တဲ့ ကရင်ကြီးဖျက်လိုက်တဲ့ စာသားများ
ဘလော့ပိုင်ရှင်ကြီးသို့ : ရှေးတုံးက ဗမာဘုရင်တွေ သတ်ခဲ့တာကိုရေးပြီး အခုခေတ်မှာ KNU သတ်ဖြတ်တဲ့ အကြောင်းကို မရေးဘူးဆိုရင် သဘာဝမကျဘူး။ KNUတွေကို စစ်ခုံရုံးတင်ဖို့တောင်းဆိုပါ။
ဘလော့ပိုင်ရှင်ကြီးသို့ : ရခိုင်တွေ သန်းနဲ့ချီပြီး သတ်ခံခဲ့ရတာကို ဘယ်လိုရှောင်ရမလဲဆိုတာ ဗမာက သင်ခန်းစာယူရမယ်ဆို? KNU လုပ်ခဲ့တာကို ကရင်တွေလဲ သင်ခန်းစာယူရမယ်။ KNU အကြောင်းရေးပါ။
မန်းကိုကို : ခုနေတော့ အားလုံးအတွက် လိုနေတဲ့ ပညာရေးး၊ နိုင်ငံရေး၊ လူမှုရေးတွေကို မြှင့်တင်ဖို့ပဲ အာရုံထားချင်ပါတယ်။ လူဆိုးတွေအကြောင်းလည်း တချိန်မှာတော့ ပြောကြရမှာပါ။
2011-06-04 10:12 PM
မန်းကိုကို : အချင်းချင်း နားလည်မှုတွေ ပေးခဲ့ကြသူတွေ ၊ ကူညီဖေးမ ခဲ့ကြသူတွေကိုလည်း စော်ကားရာ ရောက်ပါတယ် ။ သမိုင်းဆိုတာ နောင်လာနောက်သားတွေက ဆုံးဖြတ်မှာပါ ။
2011-06-04 10:07 PM
မန်းကိုကို : ဒါပေမယ့် လူအချို့ရဲ့ ဥာဏ်နည်းခဲ့မှုတွေကို တစိမ့်စိမ့်တွေးပြီး စားမြုံ့ပြန် နာကျည်းနေရအောင်တော့ မီးမမွှေး ပါရစေနဲ့ ။
2011-06-04 10:04 PM
မန်းကိုကို : ဘယ်လူမျိုးက ဘယ်လို ၊ ဘယ်ဘာသာဝင်တွေက ဘယ်လို ဆိုတာတွေကို အပိုဆာဒါတွေ ထည့်ပြီးပြောရင် ၊ အချို့အတွက်တော့ ခဏတာ စိတ်ပျောက်စေနိုင် ပါလိမ့်မယ် ။
2011-06-04 10:01 PM
ဘလော့ပိုင်ရှင်ကြီးသို့ : KNUက ဗမာအရပ်သားတွေကို သတ်ခဲ့တဲ့အကြောင်း ရေးပြပါ။ KNU က ဗုဒ္ဓဘာသာ ကရင်တွေကို တိရိစ္ဆာန်တွေလို နှိမ်ချခဲ့တာကိုလဲ သမိုင်းမပျောက်အောင် ရေးပြပါ။ ကျန်းမာပါစေ။
2011-06-04 9:52 PM
Grandfather Tar Mike : knuအင်းစိန်တိုက်ပွဲမှာ ဗမာတွေကို ရက်ရက်စက်စက်သတ်ခဲ့တာ ကရင်အချင်းချင်းဘယ်လိုနှိပ်ကွပ်တယ်ဆိုတာ လူကြီးမင်းကိုယ်တိုင်ရေးတာ ဖတ်ချင်တယ်ဗျာ။ ကျန်းမာပါစေ။
ဘလော့ပိုင်ရှင်ကြီးသို့ : KNU အင်းစိန်တိုက်ပွဲမှာ ဗမာတွေကို ဘယ်လို ရက်ရက်စက်စက်သတ်ခဲ့တယ်။ KNUက ကရင်အချင်းချင်း ဗုဒ္ဓဘာသာတွေအပေါ် ဘယ်လို နှိပ်ကွပ်ခဲ့လဲဆိုတဲ့ သမိုင်းကို ပြောပြပါ။
ဗမာ နဲ့ တိုင်းရင်းသားတွေကို သွေးကွဲအောင် စစ်အုပ်စုက လုပ်နေတာပါ။ says:
June 5, 2011 at 10:43 AM Reply
ဗမာ နဲ့ တိုင်းရင်းသားတွေကို သွေးကွဲအောင် စစ်အုပ်စုက လုပ်နေတာပါ။
တရားမဝင် ပြည်ဖျက်အစိုးရရဲ့ လက်ကိုင်တုတ် သိစေရန် ---
"သန်းရွှေ မခိုးပါဘူး" လို့ ကြိုက်တဲ့ စစ်ဗိုလ် ဆိုင်ယာနိုက် သောက်ကြေး ငြင်းရဲလား says:
June 5, 2011 at 6:39 PM Reply
"သန်းရွှေ မခိုးပါဘူး" လို့ ကြိုက်တဲ့ စစ်ဗိုလ် ဆိုင်ယာနိုက် သောက်ကြေး ငြင်းရဲလား
ဦးနှောက်ဆေးခံထားရတဲ့အတိုင်း စစ်အစိုးရရဲ့ ရက်စက်ယုတ်မာကောက်ကျစ်မှုတွေ၊ ကတိမတည်ပဲ ဗြောင်လိမ်ဗြောင်စား လုပ်မှုတွေ၊ သုံးစား မရအောင် ညံ့ဖျင်းမှုတွေ၊ လူသတ်မှုပေါင်း များစွာ အပါအဝင် သေဒဏ်ထိုက်တဲ့ ရာဇဝတ်မှုကြီးတွေ၊ စစ်ရာဇဝတ်မှုတွေ၊ လူမျိုးတုံး သတ်ဖြတ်မှုတွေ၊ လူအစုအပြုံလိုက် သတ်ဖြတ်မှုတွေ၊ (အထူးသဖြင့် တိုင်းရင်းသားဒေသတွေမှာ) မုဒိမ်းမှုတွေ၊ အတင်းအကြပ် ရွာပြောင်းမှု၊ မြေသိမ်းမှု၊ လယ်သိမ်းမှု၊ ဒေါ်လာ သန်းပေါင်း ထောင်နဲ့ချီပြီး ခိုးမှုတွေ၊ အထိန်းအကွပ်မရှိ လာဘ်စားမှုတွေ ...... အပါအဝင် ရာဇဝတ်မှု မျိုးစုံကို ဖုံးကွယ်ထားပြီး ဒီမိုကရေစီ လိုလားသူ တိုင်းရင်းသားပြည်သူတွေကို အပြစ်တင်ပြီး စစ်အစိုးရ အသွင်ပြောင်း ကြံဖွတ်အစိုးရဖက်က မျက်စေ့မှိတ်ပြီး ကာကွယ်ပြီး ဝါဒဖြန့်ပေးနေတဲ့ ရုရှားရောက် စစ်ဗိုလ်လေးများသို့ .....
အခု ကြိုက်တဲ့ စစ်ဗိုလ် ငြင်းချင်လား၊ "သန်းရွှေ မခိုးပါဘူး" ဆိုတာ။ ကြိုက်တဲ့ကြေးခေါ်ပါ။
"ကြံ့ဖွတ်က လူမသတ်ပါဘူး" လို့ ငြင်းရဲလား။ ဆိုင်ယာနိုက် သောက်ကြေး လောင်းမလား။
အေး ... မင်းတို့ သိရအောင် ငါ ပြောမယ်။
မင်းတို့ ပညာရှင် ကျန်းမာရေးဝန်ကြီး ဖေသက်ခင်တို့၊ ဒုဝန်ကြီးတို့ ဆိုတာ ငါနဲ့ ကျောင်းနေဖက်တွေပဲ။ ငါ ဘာကောင်လဲ ဆိုတာ သူတို့ ကောင်းကောင်း သိတယ်။
C-Box မှတ်ချက်များ (အောက်ကနေ အပေါ်ကို ပြန်ဖတ်ရန်) says:
June 7, 2011 at 9:26 AM Reply
7 Jun 11, 09:15 AM
Nge Naing: Kyaw ပြောတာတွေ တကယ်ဖြစ်ခဲ့တယ် ဆိုရင်လည်း ဒါပြည်တွင်းစစ်ကြောင့် ဖြစ်တဲ့အတွက် ဘယ်သူလုပ်လို့ဖြစ်ဖြစ် ပြည်တွင်းစစ်ကို အဒွန့်ရှည်အောင် မွေးထားတဲ့ အာဏာရှင်တွေရဲ့ တာဝန်သာ ဖြစ်တယ်။
7 Jun 11, 09:11 AM
Nge Naing: Kyaw ဆိုတဲ့ တယောက်လည်း ကိုယ်တိုင် အတွေ့အကြုံမဟုတ်ရင် ဘယ်ကအချက်အလက်လဲ ဆိုတာ အခုလိုပဲLink လာထည့်ပြီး ပို့စ်အောက်မှာ လာရေးပေးပါ။ အခြေအမြစ်မရှိ၊ အကိုးအကားမရှိဘဲနဲ့ လာရေးတာ ဆက်ပြီးလက်ခံမှာ မဟုတ်ဘူး။
7 Jun 11, 09:07 AM
Nge Naing: အခုအောက်မှာ လာထည့်တဲ့ Link တွေ အားလုံးအတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဖြတ်လေးဖြတ် ပို့စ်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဖြစ်လာတဲ့ Link တွေဖြစ်လို့ ကူးပြီး ပို့စ်အောက်မှာ ထည့်လိုက်မယ်။
7 Jun 11, 07:22 AM
သန်းရွှေကKNUထက်လူပိုသတ်တယ်: နှလုံးရောဂါ ရှိသူများ၊ သွေးလန့်တတ်သူများ ရှေ့ကလင့်တွေကို ဖွင့်မကြည့်ပါရန် သတိပေးပါတယ်။
သန်းရွှေကKNUထက်လူပိုသတ်တယ်: ရှေ့ကလင့်တွေက ကရင်ပြည်နယ်မှာ လက်နက်မဲ့၊ အပြစ်မဲ့ ရွာသားတွေကို သန်းရွှေရဲ့ ခါးပိုက်ဆောင်တပ် အဖြစ် အသုံးချခံနေရတဲ့ မြန်မာစစ်တပ်က ရက်ရက်စက်စက် ဥပဒေမဲ့ ပစ်သတ်ခဲ့တဲ့ ဓါတ်ပုံတွေပါ။
7 Jun 11, 07:14 AM
7 Jun 11, 07:13 AM
7 Jun 11, 07:12 AM
7 Jun 11, 07:11 AM
7 Jun 11, 07:10 AM
7 Jun 11, 07:09 AM
7 Jun 11, 07:08 AM
7 Jun 11, 07:07 AM
7 Jun 11, 07:06 AM
7 Jun 11, 07:04 AM
7 Jun 11, 07:03 AM
7 Jun 11, 07:02 AM
7 Jun 11, 07:01 AM
7 Jun 11, 06:59 AM
7 Jun 11, 06:58 AM
သန်းရွှေကKNUထက်လူပိုသတ်တယ်: စစ်ရာဇဝတ်ကောင်အဖြစ် အိုင်စီစီမှာ တရားစွဲဖို့ အိုဘားမားက ထောက်ခံထားခြင်းခံရတဲ့ သန်းရွှေရဲ့ လူမိုက်ဝါဒကြောင့် မြန်မာစစ်တပ်က နှစ် ၂ဝ အတွင်းမှာ တိုင်းရင်းသားနယ်မြေတွေမှာ လူသောင်းနဲ့ချီပြီး သတ်ခဲ့ပြီးပါပြီ။
7 Jun 11, 01:49 AM
ပြန်ဖတ်လေဆိုလိုရင်းကို: kyaw: မော်လမြိုင် ကျိုက်ထို ရထားလမ်းကို မိုင်းခွဲပြီး ကျောင်းသူ(၁၀၀)ကျော်ကို KNU တရုပ်ဖြူလက်ထဲ ရောင်းစားတာကို မေ့နေပီလား မငယ်နိုင်...။
ပြန်ဖတ်လေဆိုလိုရင်းကို: kyaw: ဖြတ်လေးဖြတ် ဆိုတာ ရက်စက်ယုတ်မာတဲ့ ဗကပနဲ့KNUကို အောင်နိုင်ခဲ့တဲ့ စစ်ဗျူဟာဆိုတာ မေ့နေပီလား မငယ်နိုင်..။6Jun 11, 03:43
7 Jun 11, 01:48 AM
ပြန်ဖတ်လေဆိုလိုရင်းကို: kyaw: ယခု အင်းစိန်မှာနေတဲ့ ကရင်လူမျိုးတွေကို ဗမာတွေ မသတ်ခဲ့ဘူးနော် လွတ်လပ်ရး ရခါစက အင်းစိန်မှာ နေခဲ့တဲ့ ဗမာတွေကို သတ်ခဲ့တာ KNDO တွေဆိုတာ မေ့နေပြီးလား မငယ်နိုင်..။
ပြန်ဖတ်လေဆိုလိုရင်းကို: ဖူးမြို့ လူ(၁၀၀၀)ကျော်ကို KNU သတ်ခဲ့တာကို မေ့နေပြီးလား မငယ်နိုင်.
ပြန်ဖတ်လေဆိုလိုရင်းကို: kyaw: ဖြတ်လေးဖြတ်ကြောင့် ဧရာဝတီမြစ်ဝ ကျွန်းပေါ်နဲ့ ပဲခူးရိုးမမှာ KNUနဲ့ဗကပ တို့ကျဆုံးသွားတာ လူတိုင်းသိတယ်နော် မငယ်နိုင်..။
7 Jun 11, 01:47 AM
7 Jun 11, 12:21 AM
Nge Naing: အောက်ကတယောက် ဘာတွေရေးထားတာလဲ။ နားမလည်ဘူး။ ၀ါကျတွေကို ပြန်ပြင်ပြီး ပို့စ်နဲ့ဆိုင်တဲ့အတွက် ပို့စ်အောက်မှပဲ ဆိုလိုချင်တာကို တိတိကျကျ ပြန်ရေးပေးပါ။ ကျွန်မရေးထားတာ တကယ်ကြုံတွေ့ခဲ့တဲ့ အတွေ့အကြုံတွေ ဖြစ်တယ်။
7 Jun 11, 12:01 AM
သန်းရွှေရဲ့ ခါးပိုက်ဆောင်တပ် အဖြစ် အသုံးချခံနေရတဲ့ မြန်မာစစ်တပ်က KNU ထက် ဥပဒေမဲ့ လူပိုသတ်တယ် (၁) says:
June 7, 2011 at 10:19 AM Reply
သန်းရွှေရဲ့ ခါးပိုက်ဆောင်တပ် အဖြစ် အသုံးချခံနေရတဲ့ မြန်မာစစ်တပ်က KNU ထက် ဥပဒေမဲ့ လူပိုသတ်တယ် (၁)
စစ်ရာဇဝတ်ကောင်အဖြစ် အိုင်စီစီမှာ တရားစွဲဖို့ အိုဘားမားက ထောက်ခံထားခြင်းခံရတဲ့ သန်းရွှေရဲ့ လူမိုက်ဝါဒကြောင့် မြန်မာစစ်တပ်က နှစ် ၂ဝ အတွင်းမှာ တိုင်းရင်းသားနယ်မြေတွေမှာ လူသောင်းနဲ့ချီပြီး သတ်ခဲ့ပြီးပါပြီ။
သန်းရွှေရဲ့ ခါးပိုက်ဆောင်တပ် အဖြစ် အသုံးချခံနေရတဲ့ မြန်မာစစ်တပ်က KNU ထက် ဥပဒေမဲ့ လူပိုသတ်တယ် (၂) says:
သန်းရွှေရဲ့ ခါးပိုက်ဆောင်တပ် အဖြစ် အသုံးချခံနေရတဲ့ မြန်မာစစ်တပ်က KNU ထက် ဥပဒေမဲ့ လူပိုသတ်တယ် (၂)
အောက်က လင့်တွေက ကရင်ပြည်နယ်မှာ လက်နက်မဲ့၊ အပြစ်မဲ့ ရွာသားတွေကို သန်းရွှေရဲ့ ခါးပိုက်ဆောင်တပ် အဖြစ် အသုံးချခံနေရတဲ့ မြန်မာစစ်တပ်က ရက်ရက်စက်စက် ဥပဒေမဲ့ ပစ်သတ်ခဲ့တဲ့ ဓါတ်ပုံတွေပါ။
နှလုံးရောဂါ ရှိသူများ၊ သွေးလန့်တတ်သူများ အောက်က လင့်တွေကို ဖွင့်မကြည့်ပါရန် သတိပေးပါတယ်။
သန်းရွှေရဲ့ ခါးပိုက်ဆောင်တပ် အဖြစ် အသုံးချခံနေရတဲ့ မြန်မာစစ်တပ်က KNU ထက် ဥပဒေမဲ့ လူပိုသတ်တယ် (၃) says:
June 7, 2011 at 10:24 AM Reply
သန်းရွှေရဲ့ ခါးပိုက်ဆောင်တပ် အဖြစ် အသုံးချခံနေရတဲ့ မြန်မာစစ်တပ်က KNU ထက် ဥပဒေမဲ့ လူပိုသတ်တယ် (၃)
နှလုံးရောဂါ ရှိသူများ၊ သွေးလန့်တတ်သူများ ရှေ့ကလင့်တွေကို ဖွင့်မကြည့်ပါရန် သတိပေးပါတယ်။
သန်းရွှေရဲ့ ခါးပိုက်ဆောင်တပ် အဖြစ် အသုံးချခံနေရတဲ့ မြန်မာစစ်တပ်က KNU ထက် ဥပဒေမဲ့ လူပိုသတ်တယ် (၄) says:
သန်းရွှေရဲ့ ခါးပိုက်ဆောင်တပ် အဖြစ် အသုံးချခံနေရတဲ့ မြန်မာစစ်တပ်က KNU ထက် ဥပဒေမဲ့ လူပိုသတ်တယ် (၄)
သန်းရွှေရဲ့ ခါးပိုက်ဆောင်တပ် အဖြစ် အသုံးချခံနေရတဲ့ မြန်မာစစ်တပ်က KNU ထက် ဥပဒေမဲ့ လူပိုသတ်တယ် (၅) says:
June 7, 2011 at 10:29 AM Reply
သန်းရွှေရဲ့ ခါးပိုက်ဆောင်တပ် အဖြစ် အသုံးချခံနေရတဲ့ မြန်မာစစ်တပ်က KNU ထက် ဥပဒေမဲ့ လူပိုသတ်တယ် (၅)
ကျပ်စားသူ (ကျပ်ငွေကိုသာ လခစားရသူ - ပြည်တွင်း) says:
June 7, 2011 at 12:25 PM Reply
ကိုင်း တွေ.ပြီ မဟုတ်ပါတကား....
လက်နက်မဲ.၊ အပြစ်မဲ. အရပ်သားတွေကို စည်းမဲ.ကမ်းမဲ. ဥပဒေမဲ့ ရက်ရက်စက်စက် ပစ်သတ်တဲ. နေရာမှာ KNU ဟာ စစ်ရာဇဝတ်ကောင် သန်းရွှေရဲ့ ခါးပိုက်ဆောင်တပ် အဖြစ် အသုံးချခံနေရတဲ. မြန်မာကြေးစား စစ်တပ်ရဲ. ခြေဖျားတောင် မမှီဘူးဆိုတာကို အသင်တို.အနေနဲ. သတိမူကြလော.
စစ်ရာဇဝတ်ကောင် သန်းရွှေရဲ့ လက်ကိုင်တုတ် မြန်မာကြေးစားစစ်သားတို.ကို.... အားကျ အတုမယူကြလင်.
June 7, 2011 at 2:00 PM Reply
ဖြူးမြို့ လူ (၁၀၀၀) ကျော်ကို KNU သတ်ခဲ့တာကို မေ့နေပြီးလား မငယ်နိုင်.
လူတိုင်းဟာ အမှားနဲ့မကင်းဘူး ဆိုတဲ့စကားလုံးကို မင်း ကြားဖူးလား ဒီအသက်အရွယ် ရောက်နေပြီပဲ ကြားဖူးမှာပေါ့KNU မှားခဲ့ တာနဲ့နအဖ မှားခဲ့ တာ ဘယ်သူက ပိုများလဲ
စပါးနက် သင်္ဘောကို KNU တွေ ရက်ရက်စက်စက် ပစ်ခဲ့ တယ်
အပစ်မဲ့ပြည်သူတွေ သေခဲ့ တယ်
အဲဒါ မင်း ကြားဖူးလား အဲဒါတွေလည်း ဖြစ်ခဲ့ ဖူးတယ်
လောလောဆယ် မိုက်ရိုင်းနေတာ ဘယ်သူလဲ ရက်စက်နေတာ ဘယ်သူလဲ
အဲဒါကို မင်းမသိရင် မင်း ငပေါပဲ